The MYAWADY Daily: January 2016
တပ်မတော်(ရေ)မှ စစ်ရေယာဉ် အောင်ဇေယျ အိန္ဒိယနိုင်ငံ Visakhapatnam ဆိပ်ကမ်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေတပ်စစ်ရေယာဉ်များ တွေ့ဆုံပွဲ တက်ရောက်ရန် ထွက်ခွာ
တပ်မတော်(ရေ)မှ စစ်ရေယာဉ်-အောင်ဇေယျ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာစဉ်
နေပြည်တော် ၊ ၃၁-၁-၂၀၁၆
မြန်မာ့ တပ်မတော်(ရေ )မှ မောရဝတီ ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ် ဌာနချုပ်မှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ထိန်ဝင်း ဦးဆောင်သော စစ်ရေယာဉ်- အောင်ဇေယျသ ည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရေတပ်ဌာနချုပ် (Eastern Naval Command) တည်ရှိရာ အိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်း၊ Andhra Pradesh ပြည်နယ်၊ Visakhapatnam ဆိပ်ကမ်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေတပ် စစ်ရေယာဉ်များ တွေ့ဆုံပွဲ (International Fleet Review-IFR) သို့ တက်ရောက် ရန်အတွက် ယမန်နေ့နံနက် ၆ နာရီ မိနစ် ၅ဝ တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမှတ်(၃) ရေတပ် ဆိပ်ခံတံတား မှထွက်ခွာရာ ရေတပ်သင်္ဘောကျင်း ဌာနချုပ် ဌာနချုပ်မှူး ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဦး နှင့် တပ်မတော်(ရေ )မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများက ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက် ကြသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေတပ် စစ်ရေယာဉ် များတွေ့ဆုံပွဲ (International Fleet Review-IFR) ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ Visakhapatnam ဆိပ်ကမ်းတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်မှ ၈ ရက်အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ တပ်မတော်(ရေ)မှ စစ်ရေယာဉ်- အောင်ဇေယျ အပါအဝင် နိုင်ငံ တကာ ရေတပ်များမှ စစ်ရေယာဉ် စုစုပေါင်း ၂၄ စင်း တက်ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မြန်မာ့ တပ်မတော်(ရေ )မှ စစ်ရေယာဉ်သည် မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံမှု ၆၈ နှစ်တာ ကာလအတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ Visakhapatnam ဆိပ်ကမ်းသို့ ဒုတိယအကြိမ် ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ (၁၀၀)
အထက်တန်းပြ ဆရာ ဆရာမလိုအပ်ချက် များပြားသဖြင့် ဘီအီးဒီ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ပိုမိုခေါ်ယူရန်စီစဉ်
ရန်ကုန် ၊ ၃၁-၁-၂၀၁၆
အထက်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ်ချက် များပြားသဖြင့် ဘီအီးဒီ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို ပိုမိုခေါ်ယူနိုင်ရန် စီစဉ်လျက် ရှိကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ သိရသည်။
''ဘီအီးဒီ ကျောင်းသားတွေ တိုးခေါ်နိုင်အောင် ဆွေးနွေးဖို့ ပညာရေး ဝန်ကြီးကလည်း ညွှန်ကြား ထားတယ်။ ဆရာ လိုအပ်ချက်က တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်အလိုက် လိုအပ်နေတယ်။ သူ့ဒေသနဲ့သူ လိုအပ်ချက် အတိုင်း ခန့်သွားမှာပါ'' ဟု ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်ပညာရေး တက္ကသိုလ်မှ ဘီအီးဒီ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၆ဝဝ နှင့် စစ်ကိုင်းပညာရေး တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၆ဝဝ တစ်နှစ်လျှင် စုစုပေါင်း ၁၂ဝဝ မွေးထုတ် ပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
''ပညာရေးတက္ကသိုလ် နှစ်ခုကနေ တစ်နှစ်ကို ဘီအီးဒီ ကျောင်းဆင်း ၁၂ဝဝ နဲ့ ဆရာအတတ်သင် ကျောင်း ဆင်း ၃ဝဝဝ ကျော်ကို မွေးထုတ်ပေး နေပါတယ်။ ဘွဲ့လွန်တွေ ကိုလည်း သုံးနှစ် ဒါမှမဟုတ် လေးနှစ် သင်တန်းပေးပြီး ဆရာဖြစ်အောင် မွေးထုတ်ပေးဖို့ စီမံကိန်းတွေ ရှိပါတယ်'' ဟု ၄င်းက ဆက်လက် ပြောသည်။
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ပညာသင်နှစ်တွင် မူလတန်းဆရာ၊ ဆရာမ ၅၁၄၆၈ ဦး လိုအပ်လျက် ရှိပြီး အခြေခံပညာ မူလတန်း၊ အခြေခံပညာ အလယ်တန်းနှင့် အခြေခံပညာ အထက်တန်း စုစုပေါင်း ဆရာ၊ ဆရာမ ၆ဝဝဝဝ ကျော် လိုအပ်နေခြင်း ကြောင့် မူလတန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ များကို နေ့စားလပေးများ ခန့်အပ်ထားရန် အပြီးသတ်စီမံ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ ပညာသင်နှစ်တွင် ၁၂ တန်း ပညာရေးစီမံကိန်း စတင် အကောင်အ ထည် ဖော်မည် ဖြစ်သဖြင့် လက်ရှိ လိုအပ်နေသည့် ဆရာ၊ ဆရာမများထက် ပိုမို လိုအပ်နိုင်ကြောင်း ပညာရေး အသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရသည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် သူများကို အမြင်အာရုံ စစ်ဆေးမည်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် အတွက် (၈)ကြိမ်မြောက် စာမေးပွဲဖြေဆို အောင်မြင်ထားသူ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၃၅ နှစ်ကြား လူငယ်များကို အမြင်အာရုံ စစ်ဆေးမှုများ စတင်လုပ်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရ အလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ထိုသို့ အမြင်အာရုံ စစ်ဆေးမှုကို အဓိက စစ်ဆေးရာတွင် အရောင် မှားယွင်းခြင်းကို အများဆုံးတွေ့ရသည့် အတွက် တောင်ကိုရီးယား အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် မေလတွင်
ပြုလုပ်ခဲ့သည့် (၇)ကြိမ်မြောက် စာမေးပွဲအထိ တောင်ကိုရီးယား ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုကိုသာ အဓိကထား ဖြေဆိုရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''အရောင် ခွဲခြားနိုင်မှုရှိ၊ မရှိကို အရင်ဆုံး တတ်ကျွမ်းနားလည် တဲ့ မျက်စိ ဆရာဝန်တွေဆီမှာ စစ်ဆေးမှု ခံယူပြီးတော့မှ Colour Blind မဟုတ်ဘူးလို့ သိရမှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုဖို့ အကြံပြုလို ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ တချို့က ငွေကုန်ကြေးကျနဲ့ အချိန်တွေ ကုန်ပြီး စာမေးပွဲဝင်ဖြေ ကြတယ်။ အမှတ်လည်း ကောင်းတယ်။ အောင်လည်း အောင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ အခါမှာ Colour Blind စစ်တော့ မအောင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်'' ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံမှ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံသို့ အလုပ်သမားများကို ပို့ဆောင်လျက် ရှိရာ အလုပ်သမား များအား အမြင်အာရုံ စစ်ဆေးရန် ယင်း အစီအစဉ်ကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်း မှစတင်၍ တရားဝင် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ စစ်ဆေးရန် တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၏ အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း ဖြစ်ကာ စာမေးပွဲ အောင်မြင်ထား သူများအနေဖြင့် အမြင်အာရုံ စစ်ဆေးရာတွင် ငွေကြေးပေးသွင်းရန် မလိုကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၌ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် လျှောက်ထားသူမှာ တစ်ကြိမ်လျှင် လူဦးရေ ၁ဝဝဝဝ ကျော်ရှိပြီး အလုပ်ခေါ်ယူမှု နှုန်းမှာ တစ်ကြိမ်လျှင် ဦးရေ ၃ဝဝဝ မှ ၄ဝဝဝ အထိသာ ခေါ်ယူကြောင်း သိရသည်။
ရေမနောက် ကြာမရှောက် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတည်ဆောက်
လောကပညတ္တကျမ်း အလိုအရ ရေလည်းမနောက် စေရ၊ ကြာပင်လည်း မရှုပ်ထွေး စေရဘဲ ရေ ကြည် သောက်သကဲ့သို့ မည်သူ့ကိုမျှ မထိခိုက်စေဘဲ မိမိလိုရာကိစ္စ ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းကို " ရေမနောက် ကြာမရှောက် " ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာသော်ကား တစ်ရံရောအခါ ကြာပင်များ အစီအရီ ပေါက်ရောက်လျက် ရှိသော ရေအိုင်နှင့် မလှမ်းမကမ်းမှ ယာတောတွင် တောင်သူ ဇနီးမောင်နှံတို့ တောင်ယာစိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင် စားသောက် နေထိုင်ကြသည်။
ထိုတောင်ယာတဲ အနီးတွင် နဂါးမတစ်ကောင် အသိုက်ပြု၍ နေသည်။ တစ်နေ့သော် နဂါးမ အစာရှာသွားခိုက် တောမီးလောင်ရာ လယ်သမားသည် ဥများနှင့် နဂါးသိုက်ကို မီးလောင်မည် စိုးသဖြင့် နေရာရွှေ့ထား လိုက်သည်။ နဂါးမ ပြန်ရောက်လာ၍ အသိုက်နေရာ ယွင်းနေ သည်ကို တွေ့လျှင် ဒေါသထွက်ကာ တောင်သူကြီးအား ပေါက်သတ်ရန် အမောက်ထောင်သည်။ လယ်သမားက တောမီးလောင် မည်စိုး၍ ရွှေ့ထား လိုက်ကြောင်း ရှင်းပြ၍ ကျေးဇူးရှင် ဖြစ်သော မိမိအား ထိုသို့ပြုရာ သလောဟု ဆိုလေရာ နဂါးမ က လက်မခံ သော်လည်း လယ်သမားက ခုနစ်ရက် ဆိုင်းရန် ပြောသည်ကိုမူ နဂါးမ က လက်ခံ သဘောတူ လိုက်သည်။
ထိုအကြောင်းကို လယ်သမားကြီးဇနီး သိလေသော အခါ ခင်ပွန်းအား မစိုးရိမ်ရန် ပြောကြားပြီး နဂါးမ ရှိရာရေအိုင်သို့ သွား၍ အရှင်နဂါးမ ထံ ရေသောက်ခွင့် တောင်းသည်။ နဂါးမက ရေသောက် ခွင့် ပြုရာတွင် ရေလည်းမနောက်၊ ကြာလည်းမရှောက် စေနှင့်ဟု ဆိုရာ ထိုမိန်းမက ကျူရိုးအဆစ်ကို ဖောက်ထွင်း၍ ရေကိုကျူရိုးပြွန်ဖြင့် စုပ်သောက် သောကြောင့် ရေလည်းမနောက် ကြာလည်း မရှောက် ရှိလေသည်။
လယ်သမားကြီး ဇနီးသည် ရေဝအောင် သောက်ပြီးသော် စောင့်ကြည့် နေသော နဂါးမအား တုတ်ဖြင့် ရိုက်သတ်မည် ပြုသည်။ နဂါးမက ကျေးဇူးရှင် ငါ့ကို ရိုက်သတ်ရာ သလောဟု ဆိုသည်။ ထိုအခါ လယ်သမားကြီး ဇနီးက ငါ၏ခင်ပွန်း သင့်ကျေးဇူးရှင်ကို သင်က ပေါက်သတ်မည် ဆို၍ ချေပရန် လာသည်ဟု ဆိုလိုက်သည်။ ဤသို့ဖြင့် လယ်သမားကြီး သည် လည်းကောင်း၊ နဂါးမသည် လည်းကောင်း အသက်မသေ ချမ်းသာရကြ သည်ကို အကြောင်းပြု၍ ရေမနောက်၊ ကြာမရှောက် ဆိုသော စကားပုံသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း ၌ ပြောစမှတ် ပြုနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ လောကပညတ္တကျမ်း လာ သာဓကအရ လောဘ၊ ဒေါသနှင့် မောဟတို့ ဖြစ်နေလျှင် တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ တစ်သင်းတစ်ဖွဲ့ ၏ ပူလောင်မှု စိတ်နှလုံးသည် ပတ်ဝန်းကျင် ကိုပါ ပူလောင် စေတတ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းသော စိတ်နှလုံးသည် မိမိ သူတစ်ပါး အများအတွက် ငြိမ်းချမ်းသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ လောဘ၊ ဒေါသနှင့် မောဟတို့ ငြိမ်းချမ်းစေရန် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာနှင့် ပြည့်စုံကြ ရပေမည်။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ဆောက်ကြ ရာတွင် လူအမျိုးမျိုး ပါဝင်ကြမည်ဖြစ်ရာ လူနာလေးမျိုး ကို ဥပမာပေးရသော် မိမိမှာ ရောဂါရှိနေသည် ကို အမှန်အတိုင်း မသိသူ၊ မိမိမှာ ရောဂါ ရှိနေသည်ကို အမှန်အတိုင်း သိသော်လည်း ဆေးမသောက်သူ၊ မိမိမှာရောဂါ ရှိနေသည်ကို အမှန်အတိုင်း သိ၏။ ဆေးကို ရံဖန်ရံခါသာ သောက်သော်လည်း မှန်မှန်မသောက် သူတို့သည် နာတာရှည်ရောဂါ ဝေဒနာခံစား ကြရမည် ဖြစ်သည်။ ဤအတူ သာလျှင် ဒီမိုကရေစီ တန်ဖိုးနှင့်တာဝန်ကို အမှန်အတိုင်း မသိသူ၊ သိသော်လည်း ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်ကို မလိုက်နာသူ၊ လိုက်နာသော်လည်း မိမိအခွင့်သာမှ လိုက်နာသူ စသည်ဖြင့် ရှိကြသော် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေး နှောင့်နှေးနေမည် ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်၍ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦးနားလည်မှု၊ စာနာ ထောက်ထားမှု တို့ဖြင့် ရေမနောက်၊ ကြာမရှောက် အခြေအနေမျိုးကို ဖန်တီးကာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ဆောက်ကြ ပါရန် မြဝတီက တိုက်တွန်းနှိုးဆော် လိုက်ရပါသည်။
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၃၁-၁-၂၀၁၆) တနင်္ဂနွေနေ့
အင်ဒိုနီးရှားရောက် မြန်မာရေလုပ်သား ခုနစ်ဦး ပြန်လည်ရောက်ရှိ
ရန်ကုန် ၊ ၃၀-၁-၂၀၁၆
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အန်ဘွန်ကျွန်း၌ ရောက်ရှိနေသော မြန်မာရေလုပ်သား ခုနစ်ဦးသည် ယမန်နေ့ည ၇ နာရီတွင် သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးနှင့် IOM အဖွဲ့တို့၏ အကူအညီဖြင့် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိသည်။
အဆိုပါ ရေလုပ်သားများအား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ကောင်စစ်ရေးရာ နှင့် ဥပဒေရေးရာ ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၆) လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် IOM အဖွဲ့ တို့က ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၌ ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
''ကနဦး အင်ဒိုနီးရှား သံရုံးကနေ IOM ကို အကြောင်းကြား စာရင်းပို့တာ ၁၂ ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သက်ဆိုင်ရာက အဆင့်ဆင့် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ချက် တွေအပေါ်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ သုံးစွဲထားတယ်လို့ သံသယရှိသူ လေးဦးနဲ့ အန်ဘွန်ကျွန်းမှာ အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ တစ်ဦးကိုတော့ ထားခဲ့တယ်။ အခု ခုနစ်ဦးပဲ ပြန်ပို့နိုင်ပါတယ်'' ဟု အမှတ်(၆) လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲမှူး ရဲဝင်းအောင် ကပြောသည်။
ထို့နောက် လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနမှ မော်တော်ယာဉ် များဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းရှိ လူမှုဝန်ထမ်း အတတ်သင်သိပ္ပံေ ကျာင်းသို့ ပို့ဆောင်ကာ မြို့နယ် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ ကျန်းမာရေး ကောင်း၊ မကောင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာနမှ မှတ်ပုံတင် ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ အမှတ်(၆) လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လူကုန်ကူးခံ ရသည့် အကြောင်းရင်း ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ် တို့အား မေးမြန်း စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ရေလုပ်သားများအား နေရပ် အသီးသီးသို့ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများမှ တစ်ဆင့် ပို့ဆောင် ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြန်လည်ရောက်ရှိ လာသော မြန်မာ ရေလုပ်သားများသည် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး မိချောင်းရဲမြို့နယ် မင်းရွာအုပ်စုမှ ဦးဇော်မျိုးဝင်း၊ မွန်ပြည်နယ် ကျိုက္ခမီမြို့နယ် စက်စဲကျေးရွာမှ ဦးထွန်းသောင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး မအူပင်မြို့နယ် တလုပ်လတ် ကျေးရွာမှ ဦးထက်ဝေဇော်၊ တနင်္သာရီ တိုင်း ဒေသကြီး ကော့သောင်း မြို့နယ်မှ ဦးတင်လင်းထွန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်မှ ဦးသက်လှိုင်ဦး၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ပဲခူးမြို့ ညောင်အင်း ကျေးရွာမှ ဦးနိညင်လင်းထွန်း၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မိတ္ထီလာမြို့နယ် ခုတ်ထီလာ ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးသန်းနိုင်စိုး တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် စာအုပ်ဈေးပွဲတော် ကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံ စာပေထုတ်ဝေသူ၊ ဖြန့်ဝေသူများအသင်း နှင့် တော်ဝင်မိသားစု ကုမ္ပဏီ၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် စာပေမြှင့်တင် လူ့စွမ်းအင် အခမ်းအနားတို့ ပူးပေါင်း ကျင်းပသော စာအုပ်ဈေးပွဲတော်ကို ယမန်နေ့နံနက်မှ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်အထိ ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်း ခရိုင် ဒဂုံမြို့နယ် ပြည်လမ်းပေါ်ရှိ တော်ဝင်စင်တာ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စာအုပ်ဈေးပွဲတော်သို့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ စာအုပ်အရောင်းဆိုင် ၆ဝ ကျော် လာရောက် ရောင်းချကြသည်။ ယင်း ဈေးပွဲတော်တွင် သုတရသစာအုပ် ပေါင်းများစွာအား ခင်းကျင်းပြသ ထားသဖြင့် စာပေပညာရှင်များ၊ စာဖတ်ဝါသနာ ပါသူများနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ လေ့လာဝယ်ယူ ကြကြောင်း သိရသည်။
Posted by myawady at 9:51 AM No comments:
ကမ်းရိုးတန်းရေကြောင်းဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို တောင်ကိုရီးယားနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည်
မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ကမ်းလွန်နှင့် ကမ်းရိုးတန်း ရေကြောင်းဆိုင်ရာ သုတေသန လုပ်ငန်းများကို တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
အဆိုပါ ဆောင်ရွက်မှုကို ယခုနှစ်အတွင်း စတင်မည် ဖြစ်ရာ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံရှိ ရေကြောင်းပညာ တက္ကသိုလ် အနေဖြင့်လည်း မြန်မာ့ရေကြောင်း အပါအဝင် ငါးလုပ်ငန်း ကဏ္ဍ တိုးတက်ရေး ပါဝင်ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်း ရေကြောင်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ မြန်မာနိုင်ငံ ငါးသားဖောက် လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရေး အတွက် ငါးသားဖောက် လုပ်ငန်း သုတေသန ပြုလုပ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ နှစ်သောင်း ပံ့ပိုး ကူညီပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် ငါးသားဖောက် လုပ်ငန်း လေ့လာရေး အတွက် တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံသို့ မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်များ ကိုစေလွှတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်း ငါးစားသုံးမှုနှုန်း တိုးတက် လာခြင်းကြောင့် သားငါး ထုတ်လုပ်မှု အပိုင်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေး နှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းသော အစားအစာများထုတ်လုပ်နိုင်ရေး အတွက် မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
Labels: ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, သားငါးကဏ္ဍ
ရေမျောသီး (သို့မဟုတ်) အဿဗီဇ
< ဦးလှမြင့် (ဂန္ဓမာ>
အသက်အရွယ် ကြီးလာတဲ့အခါ သွေးကြောဆိုင်ရာ တွေ့ကြုံရ အများဆုံး ပြဿနာထဲမှာ တစ်ခုဖြစ် တဲ့ သွေးကြောများ အားနည်း လာခြင်းပဲ ဖြစ်သည်။ ယင်း သွေးကြော အားနည်းခြင်း ရဲ့ အကျိုးဆက် ကတော့ များသောအားဖြင့် ဖောင့်တွန်းနေတဲ့ သွေးပြန်ကြောများ ( Varicose Veins) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သည်နေရာမှာလည်း သဘာဝက ကူညီနိုင်တာ တွေ့ရတယ်။ ရေမျောသီး (သို့မဟုတ်) အဿဗီဇ (House Chestnut) လို့ခေါ်တဲ့ မြင်းများ ၀ါးစားလေ့ရှိတဲ့ ပေါင်းမြက် တစ်မျိုးက ဖောင်းတွန့် သွေးပြန်ကြော များနဲ့ ဆံခြည်မျှင် သွေးကြောများ ပြတ်တောက်ခြင်း တို့အတွက် ကုသရာနှင့် ကာကွယ်ရာမှာ အစဉ်အလာ လက်စွဲပြု ခဲ့တဲ့ ဆေးတစ်လက် ဖြစ်တယ်။
ရေမျောသီးက သွေးကြောစနစ်ကို ကြံ့ခိုင် တောင့်တင်းစေတယ်။ နှလုံးထဲသို့ သွေးပြန်လည် စီးဝင်မှုကို လွယ်ကူ ချောမွေ့ စေတယ်။ သွေးကြောရောင်ပြီး ကြီးလာခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတယ်။ ခြေေ ထာက် အောက်ပိုင်း ရောင်ခြင်းကို သက်သာ စေရာမှာ " ထောက်ပင့် ခြေအိတ်ရှည် " လို ထိရောက်မှု ရှိတယ်။ ရေမျောသီး ဆေးတောင့်ပျော့ များကို ကျန်းမာရေး အစားအစာ စတိုးဆိုင် များမှ ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Ref : Secrets of Longevity
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၃-၁-၂၀၁၆) စနေနေ့
ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း သဲနှင့် ကျောက်ထုတ်လုပ်ငန်း များကြောင့် ကမ်းပါးပြိုကျမှုများ ဖြစ်ပွားပြီး ကျေးရွာများ ရွှေ့ပြောင်းနေရ
ပုသိမ် ၊ ၂၉-၁-၂၀၁၆
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြန်အောင်မြို့နယ် နှင့် အင်္ဂပူမြို့နယ် တို့တွင် ဧရာဝတီမြစ် အတွင်းမှ တရားမဝင် မြစ်သဲနှင့် ကျောက်ထုတ်လုပ်ငန်း များကြောင့် မြို့နယ်အတွင်း နေ့စဉ် ကမ်းပါးပြိုကျမှု များ ဖြစ်ပွားနေပြီး ကျေးရွာများ ရွှေ့ပြောင်း နေရကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
''ကျွန်တော်တို့ရွာမှာ ဆိုရင်တစ်နေ့ကို လက်အလံ ငါးလံလောက်ထိ နေ့တိုင်း ကမ်းပါးတွေပြိုကျ နေပါတယ်။ စိုက်ပျိုးပြီးလယ်တွေ ပါကုန်သလို မြစ်နဲ့ရွာက ကပ်နေတော့ ရွာဦးစေတီပါ မြစ်ထဲပြိုကျ ခါနီး ဖြစ်နေပါပြီ။ဘယ်နေ့ ရွာပါမလဲဆိုတာ စိုးရိမ်ရလို့ ရွာကို အမြန်ဆုံးပြောင်းဖို့ မြေနေရာ ရှာနေရပါပြီ'' ဟု မြန်အောင်မြို့နယ် ပဲတခွဲရွာ (ရေလယ်ကျွန်း) မှ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း မြစ်သဲကျောက် ထုတ်လုပ်နေမှုကို တရားဝင်အကွက်များ သတ်မှတ်၍ ရေအရင်းအမြစ် နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ဝယ်ယူလုပ်ကိုင် ရခြင်း ဖြစ်သော်လည်း လိုင်စင်မဲ့ သဲနှင့် ကျောက်ထုတ်လုပ် နေမှုများလည်း ရှိနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အတွင်း အင်္ဂပူမြို့နယ်ရှိ ဂွေးတောက်ချောင်း ကျေးရွာမှ အိမ်ခြေ ၁၈ဝ ကျော်နှင့် ညောင် ကုန်းကျေးရွာမှ အိမ်ခြေ ၁ဝဝ ကျော်လည်း ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ ရပြီး လက်ရှိတွင် မြန်အောင်မြို့နယ် ပဲတခွဲ (ရေလယ်ကျွန်း) ကျေးရွာမှ အိမ်ခြေ ၁ဝဝ ကျော်လည်း ရွှေ့ပြောင်းရမည့် အခြေအနေ ရောက်ေ နကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
သဲနှင့် ကျောက်ထုတ်လုပ်ငန်း များကို လိုင်စင်ချထား မပေးမီ မြစ်ကြောင်း ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာနမှ ပညာရှင်များက ဦးစွာကွင်းဆင်း လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ပြီးမှ သင့်တော်သော နေရာတွင် သဲနှင့် ကျောက် ထုတ် လုပ်ကွက်များ အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ စည်းကမ်းနှင့် အညီ လုပ်ကိုင်ရသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း မြန်အောင်မြို့နယ် မြစ်ကျောက် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ သိရသည်။
''မြန်အောင်မြို့နယ် ထဲက မြစ်ကမ်းပြိုမှာ စိုးလို့ နိုင်ငံတော်က ကျောက်စုပ်ခွင့် မပြုဘဲ ပိတ်ပင်ထားတဲ့ လုပ်ကွက်တွေကို ပဲတခွဲကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကနေပြီးတော့ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ဒီလဆန်းပိုင်းမှာ ဌာနဆိုင်ရာတွေ တိုင်ကြား ခဲ့တာကို အခုချိန်ထိ တရားမဝင် ကျောက်စုပ်နေတဲ့ လူတွေကို တားမြစ်တာ၊ အရေးယူတာ လုံးဝမရှိဘူး ဖြစ်နေပါတယ်'' ဟု မြန်အောင်မြို့နယ်၊ မြစ်ကျောက် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး ဦးစန်းဌေး က ပြောပြသည်။
ရေစကြိုမြို့နယ် မအူကျေးရွာရှိ စေတီခြောက်ဆူမှ နံရံဆေးရေးပန်းချီ များ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်လျက်ရှိ
ရေစကြို ၊ ၂၉-၁-၂၀၁၆
ရေစကြိုမြို့နယ် မအူကျေးရွာ တွင် ခေတ် အဆက်ဆက်က ပုံဖော် ရေးဆွဲထားသော နံရံဆေးရေး ပန်းချီများရှိသည့် စေတီများ အနက် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်သည့် စေတီခြောက်ဆူကို ထိန်းသိမ်း ပြုပြင်လျက် ရှိကြောင်း ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန ရှေးဟောင်း သုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာန မှ သိရသည်။
ရေစကြိုမြို့နယ် မအူကျေးရွာ ရှိ သမိုင်းဝင် ရွှေမုဋ္ဌောဘုရား ၏ ဥပစာအနီးတွင် တည်ရှိသော ယခင် မင်းအဆက်ဆက် က တည်ထားကိုးကွယ် ခဲ့သည့် နံရံဆေးရေး ပန်းချီများဖြင့် ပုံဖော်ရေးဆွဲ တည်ထားခဲ့သော စေတီပေါင်း ကိုးဆူအနက် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သည့် စေတီခြောက်ဆူ ကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ လကုန်ပိုင်း မှစ၍ ယနေ့ချိန်ထိ ပြုပြင် ပြင်ဆင်လျက် ရှိရာ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းထိ ပြီးစီးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ပြုပြင်ရာတွင် ၄င်းစေတီများနှင့် အနီး ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ချုံနွယ်များ ပိတ်ဖုံးနေသည့် နေရာများ၊ သဘာဝရေဒဏ်၊ လေဒဏ်၊ ငလျင်ဒဏ် များကြောင့် ပျက်စီးယိုယွင်း ခဲ့သည့် စေတီမုခ်ဦး၊ စေတီ လုံးပတ် နှင့်စေတီအတွင်းရှိ နံရံဆေးရေး ပန်းချီများ (ပုံ)ကို ရေရှည်ခိုင်ခံ့ စေရန်နှင့် လေ့လာသူများ ရှင်းလင်း ပီသစွာ မြင်စေရန် ပပ်ကြားအက် များကို ဖာထေးခြင်း ၊ စေတီအလုံးနှင့် စေတီအတွင်းရှိ ရုပ်ပွားတော်များကို ကြည်ညိုဖွယ် ဖြစ်အောင် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း များကို ပြုလုပ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မအူ ရွှေမုဋ္ဌောဘုရား သည် သာသနာ သက္ကရာဇ် ၂၃၆ ခုနှစ် (ဘီစီ-၃ဝ၇) နှစ်တွင် သီရိဓမ္မာ သောကမင်းကြီး တည်ထားကိုးကွယ် ခဲ့သော ပခုက္ကူခရိုင် မုဋ္ဌောကိုးဆူ အနက် တစ်ဆူ အပါအဝင် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (၁၈၇)
အာရှ-ပစိဖိတ်တွင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် ပူနွေးမှုများဖြစ်ပေါ်ပြီး ရေခန်းခြောက်မှုများ နှင့် ကုန်းနေရေနေ သတ္တ၀ါများ သေဆုံးမှုမြင့်တက်
နယူးယောက် ၊ ၂၉-၁-၂၀၁၆
အာရှပစိဖိတ်တွင် ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင် ပူနွေးမှုများ ဖြစ်ပေါ် နေသောကြောင့် ရေခန်းခြောက်မှုများ၊ ကုန်းနေရေနေ သတ္တဝါများ သေဆုံးမှု မြင့်တက်လာကြောင်း UNICEF က ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် UNICEF အနေဖြင့် ရေခန်းခြောက်မှုများ ၊ ကုန်းနေရေနေ သတ္တဝါများ သေဆုံးမှုဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ဒေသများအတွက် ကူညီပံ့ပိုး ပေးမှုများ ပြုလုပ်သွားရန် အတွက် ငွေပမာဏ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆၂ သန်းထိ ရည်ရွယ်ထားသည် ဟု ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်က ကြေညာခဲ့သည်။
''အာရှ-ပစိဖိတ် ဒေသတွေမှာ ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင် ပူနွေးမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင် နေရပါတယ်။ ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင် ပူနွေးမှုနှုန်းက လာမယ့် တစ်ပတ်အတွင်းမှာ အမြင့်ဆုံး အနေအထား ကို ရောက်ရှိလာနိုင် ပါတယ်'' ဟု UNICEF မှ တာဝန်ရှိသူ ခရစ်ရ်ှနားမာတီ က ပြောကြားခဲ့သည်။
''အရှေ့တီမောကို သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ ပါတယ်။ နိုင်ငံတွင်းမှာ အဓိက အားထားနေ ရတဲ့ မြစ်တွေ၊ ချောင်းတွေ ရေခန်းခြောက် မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြ ရတယ်။ စိမ်းလန်းနေတဲ့ လယ်ကွင်းပြင် တွေတော့ မြင်တွေ့ခဲ့ ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လယ်ကွင်းထဲမှာ စပါးတွေမရှိဘဲ မြက်ပင်တွေ ပေါက်နေပါတယ်။ ရေခန်းခြောက် နေတော့ စပါးစိုက် မရဘူးလို့ ဒေသခံတွေဆီက နေသိရတယ်'' ဟု မကြာသေးမီက အရှေ့တီမော သို့ သွားရောက် လေ့လာ ခဲ့သော ခရစ်ရ်ှနားမာတီ က ပြောကြားခဲ့သည်။
UNICEF အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တို့တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၅ သန်း ကူညီပံ့ပိုး ပေးသွားရန် လျာထားပြီး မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈ သန်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ဝ သန်းနှင့် ပစိဖိတ်မှ ကျွန်းစုနိုင်ငံ များကို အမေရိကန် ဒေါ်လာငါးသန်း ကူညီပေးသွားရန် ပြင်ဆင် နေကြောင်း သိရသည်။
Posted by myawady at 2:58 PM No comments:
Labels: El nino, နိုင်ငံတကာသတင်းမှတ်စု
ပြည်တွင်းဖြစ် ကိုယ်ပျောက် တိုက်လေယာဉ် ဂျပန်နိုင်ငံက ထုတ်ဖော်ပြသ
တိုကျို ၊ ၂၉-၁-၂၀၁၆
ရေဒါ ထောက်လှမ်းမှုကို ကိုယ်ယောင်ဖျောက် ကျော်လွှား နိုင်စွမ်းရှိသော ပြည်တွင်းဖြစ် ပထမဆုံး တိုက်လေယာဉ် တစ်စင်းကို ဂျပန်နိုင်ငံက ယမန်နေ့တွင် ထုတ်ဖော်ပြသ ခဲ့ကြောင်း အေအက်ဖ်ပီ သတင်းဌာန က ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ပြည်တွင်းဖြစ် ကိုယ်ပျောက် တိုက်လေယာဉ်ကို X-2 ဟု အမည်ပေးထားပြီး ကိုဆာကီမြို့ လေဆိပ်၌ ဂျပန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနက ထုတ်ဖော်ပြသ ခဲ့သည်။
မစ်ဆူဘီရှီ အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်းက တည်ဆောက် ခဲ့သည့် X-2 တိုက်လေယာဉ် သစ်ကို ဂျပန် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ မအပ်နှံမီ ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်း ပထမဆုံး စမ်းသပ်ပျံသန်းမှု ပြုလုပ်ရန် စီစဉ် ထားသည်။
လက်ရှိ အချိန်တွင် ရေဒါစနစ် ကိုယ်ယောင်ဖျောက် ရှောင်ရှား၍ စစ်ကစား နိုင်သည့် တိုက်လေယာဉ် များကို ကိုယ်ပိုင် ထုတ်လုပ်နိုင်သော နိုင်ငံများမှာ အမေရိကန်၊ ရုရှားနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ် ပြုထားသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသည် X-2 တိုက်လေယာဉ်သစ် တည်ဆောက်ရေး အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၃၂ သန်း သုံးစွဲခဲ့ရပြီး စမ်းသပ်ပျံသန်းမှု အောင်မြင်ပါက ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မတ်လတွင် ဂျပန် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက X-2 တိုက်လေယာဉ်ကို လက်ခံရယူမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မိုးယွင်းကြီးအင်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တောသို့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွား ၁၈၅၁၅ ဦး လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့
ပဲခူး ၊ ၂၈-၁-၂၀၁၆
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေတိမ်ဒေသ (Ramsar Site) အဖြစ်၂ဝဝ၅ ခုနှစ် တွင် သတ်မှတ်ခံရသော မိုးယွန်းကြီးအင်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော သို့ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်းခရီးသွား ၁၈၂၁၃ ဦး နှင့် ပြည်ပ ခရီးသွား ဧည့်သည် ၃ဝ၂ ဦး စုစုပေါင်း ၁၈၅၁၅ ဦး လာရောက် ခဲ့ကြောင်း မိုးယွန်းကြီးအင်း တောရိုင်း တိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော တည်ရှိရာရုံးမှ သိရသည်။
မိုးယွန်းကြီးအင်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တောသို့ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အတွင်းက ပြည်တွင်း ခရီးသွား ၁၁၂၈ဝ ဦးနှင့် ပြည်ပ ခရီးသွား ဧည့်သည် ၃၃၃ ဦး စုစုပေါင်း ၁၁၆၁၃ ဦး လာရောက်ခဲ့ သဖြင့် ယခုနှစ်တွင် လာရောက်သူ ၇ဝဝဝ နီးပါး ပိုမိုလာရောက် ခဲ့သဖြင့် ယမန်နှစ်ထက် ပြည်တွင်း ခရီးသွား အရေအတွက် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာ ခဲ့ရာ နိုင်ငံခြား ခရီးသွားဧည့်သည် အရေအတွက်မှာ လျော့နည်း လာသည်။
မိုးယွန်းကြီးအင်း တောရိုင်း တိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော သည် ရန်ကုန်မြို့နှင့် ၆၉ ဒသမ ၂ မိုင်ခန့် ကွာဝေးသည့် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ဘုရားကြီးနှင့် ဝေါမြို့နယ် အတွင်း တည်ရှိပြီး ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၄ဝ ကျယ်ဝန်းကာ ပွင့်လင်းရာသီ ဖြစ်သည့် စက်တင်ဘာလမှ ဧပြီလအထိ ပြည်တွင်း ပြည်ပခရီးသွား ဧည့်သည်များ လာရောက် လည်ပတ်လေ့ ရှိကြောင်း သိရသည်။
မိုးယွန်းကြီးအင်း တောရိုင်း တိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော သည် နိုင်ငံတကာ ရေတိမ်ဒေသ ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ (Ramsar Convention) မှ မြန်မာနိုင်ငံ၌ အရေးကြီး ထိန်းသိမ်းရမည့် နေရာတစ်ခု အဖြစ် ပထမဆုံး သတ်မှတ်ခံထား ရသည့် နေရာဖြစ်ပြီး ဒုတိယမြောက် ရမ်ဆာရေတိမ် ဒေသအဖြစ် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ အင်းတော်ကြီး တောရိုင်း တိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တောကို အတည်ပြု သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (၄၄၇)
ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံး လက်ဖက်ခြောက် တရုတ်ဘုရင်တစ်ပါး၏ ဂူသင်္ချိုင်းနေရာ၌ တွေ့ရှိ
ပေကျင်း ၊ ၂၉-၁-၂၀၁၆
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၂၁ဝဝ ကျော်က တရုတ်နိုင်ငံကို အုပ်စိုးခဲ့သော ဘုရင်ဧကရာဇ် တစ်ပါး၏ ဂူသင်္ချိုင်း နေရာတွင် ကမ္ဘာ့ ရှေးအကျဆုံး လက်ဖက်ခြောက် ဖတ်များကို တရုတ် သုတေသန ပညာရှင် များက ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့ကြောင်း အေအက်ဖ်ပီ သတင်းဌာန က ယမန်နေ့တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
သက်တမ်း ရှေးအကျဆုံးသော လက်ဖက်ခြောက် များကို ဘီစီ ၁၈၈ နှင့် ၁၄ဝ ကြား ကာလများ အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံကို မင်းပြုအုပ်စိုး ခဲ့သော ဟန်မင်းဆက် စတုတ္ထ ဧကရာဇ် ကျူကျီ၏ ဂူသင်္ချိုင်း နေရာမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်ဖက်ခြောက်နှင့် ပတ်သက်၍ အစောဆုံး စာပေ အထောက်အထား များကို ဘီစီ ၅၉ ခုနှစ်ကပင် စတင်တွေ့ရှိ ခဲ့သော်လည်း မျက်မြင်တွေ့ရှိ ရသမျှတွင် ရှေးအကျဆုံး လက်ဖက်ခြောက် အဖြစ် မြောက်ပိုင်း ဆွန်မင်းဆက် ခေတ် အေဒီ (၉၆ဝ-၁၁၂၇) က လက်ဖက်ခြောက် အကြွင်းအကျန် များသာ တွေ့ရှိခဲ့ ဖူးသည်။
သို့သော် ယခုနောက်ဆုံး တွေ့ရှိထားသည့် လက်ဖက်ခြောက် အကြွင်းအကျန် များ၏ သက်တမ်းအရ တရုတ်နိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၁ဝဝ ကျော်ကာလ ဟန်မင်းဆက် ခေတ်ကပင် လက် ဖက်ရည်ကြမ်း သောက်သုံးသည့် ယဉ်ကျေးမှု ရှိခဲ့သည် ဟူသော အချက်မှာ ထင်ရှားကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံမှ သုတေသန ပညာရှင် များက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် လက်ဖက်ရည်ကြမ်း သည် ရေပြီးလျှင် လူတို့ သောက်သုံးမှု အများဆုံး ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ သုံးပုံ နှစ်ပုံသည် လက်ဖက်ရည်ကြမ်း ကို ပုံမှန် သောက်သုံး ကြကြောင်း သိရသည်။
ချယ်လင်ဂျာလွန်းပျံယာဉ် ပေါက်ကွဲမှု နှစ်(၃၀)ပြည့် အခမ်းအနား အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ကျင်းပ
၀ါရှင်တန် ၊ ၂၉-၁-၂၀၁၆
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု လေကြောင်းနှင့် အာကာသ စီမံခန့်ခွဲရေး အေဂျင်စီ (နာဆာ)သည် ချယ်လင်ဂျာ လွန်းပျံယာဉ် ပေါက်ကွဲမှု နှစ်(၃၀)ပြည့် အခမ်းအနားကို ယမန်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ လွန်းပျံယာဉ် ပေါက်ကွဲမှု အတွင်း အသက်ဆုံးရှုံး ခဲ့ရသော အာကာသယာဉ်မှူး ခုနစ်ဦးကို အမြဲတမ်းအမှတ်ရ နေမည်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ် လူသားများ ခြေချနိုင်ရေး အတွက် မဆုတ်မနစ် ကြိုးပမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ကတိပြု ပြောကြား ခဲ့သည်။
အပိုလို-၁ အာကာသယာဉ် မှသည် ချယ်လင်ဂျာ လွန်းပျံယာဉ်နှင့် ကိုလံဘီယာ လွန်းပျံယာဉ် ခေတ်များအထိ အာကာသ စူးစမ်း လေ့လာရေး သမိုင်းတစ်လျှောက် အမေရိကန် အာကာသယာဉ်မှူး များ အသက်ဆုံးရှုံး ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် မည်သည့် အန္တရာယ်မျိုး ကြုံတွေ့သည် ဖြစ်စေ မိမိတို့ အနေဖြင့် ကြယ်ဂြိုဟ်များ ဆီသို့ သွားရောက် နိုင်ရေးအတွက် ဆက်လက်ကြိုးပမ်း သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ချယ်လင်ဂျာ ပေါက် ကွဲမှု နှစ်(၃ဝ)ပြည့် အခမ်းအနားသို့ ပေးပို့ခဲ့သည့် အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား၏ သဝဏ်လွှာ ၌ ဖော်ပြ ထားသည်။
၁၉၈၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်တွင် ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ် ကိပ်ကာနေဗာရယ်လယ် အာကာသစခန်းမှ ပစ်လွှတ်ခဲ့သော ချယ်လင်ဂျာ လွန်းပျံယာဉ်သည် ပစ်လွှတ်အပြီး ၇၃ စက္ကန့် အကြာတွင် ပေါက်ကွဲခဲ့ရာ နာဆာ အာကာသယာဉ်မှူး ခြောက်ဦးနှင့် ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး အာကာသာစခန်းမှ ကျောင်းဆရာ ဖြစ်လာမည့် ခရစ္စတာ မက်အော်လစ်ဖ် တို့ အသက်ဆုံးရှုံး ခဲ့ရသည်ဟု အေအက်ဖ်ပီ သတင်းဌာန က ဖော်ပြခဲ့သည်။
ချယ်လင်ဂျာ လွန်းပျံယာဉ် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၇ နှစ်အကြာတွင် နာဆာအဖွဲ့၏ ကိုလံဘီယာ လွန်းပျံယာဉ်သည် ကမ္ဘာ့လေထုလွှာ အတွင်းသို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာစဉ် ပေါက်ကွဲခဲ့ရာ အာကာသ ယာဉ်မှူး ခုနစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ ရသည်။
အာကာသယာဉ်မှူး များကို ကမ္ဘာမြေနှင့် အနိမ့် ကမ္ဘာပတ် လမ်းကြောင်း အကြား အသွားအပြန် ပို့ဆောင်ပေး နေသည့် အာကာသ လွန်းပျံယာဉ် အစီအစဉ်ကို သမ္မတ အိုဘားမား အစိုးရက ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် တရားဝင် အဆုံးသတ် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted by myawady at 1:15 PM No comments:
Labels: အခမ်းအနားဆိုင်ရာ, နိုင်ငံတကာသတင်းမှတ်စု
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပြပွဲ၌ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကြိမ်ထည်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပါဝင်ပြသမည်
ဂျာမနီနိုင်ငံ ဖရန့်ဖက်မြို့၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်မှ ၁၆ ရက်အထိ ငါးရက်ကြာ ပြသမည့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပြပွဲ (Ambiente 2016) ၌ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကြိမ်ထည်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီက ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် ပါဝင်ပြသ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နှစ်စဉ်ကျင်းပ နေကျဖြစ်သော အဆိုပါကုန်စည် ပြပွဲ၌ စက်မှု၊ လက်မှု ကုန်ထုတ်လုပ်သော နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှ ကုမ္ပဏီများ ဝင်ရောက် ပြသခွင့်ရှိပြီး လူသုံးကုန်နှင့် အိမ်သုံး ပစ္စည်းများ၊ ကျောက်မျက် ရတနာများ အပါအဝင် လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ၊ မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းများကို အဓိကထား ခင်းကျင်းပြသခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကုန်စည်ပြပွဲ၌ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကြိမ်ထည်နှင့် လက်မှုပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သော ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည့် Bella Interiors Co., Ltd. မှ အိမ်သုံး ပရိဘောဂနှင့် အလှဆင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ပြသမည် ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံး ပြသခွင့် ရသည့်အတွက် ပြပွဲအတွေ့အကြုံ အပြင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ဝ ကျော်မှ ပြပွဲလာရောက် ကြည့်ရှုသူများနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်မည့် အခွင့်အရေးလည်း ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ယမန်နှစ်က ကျင်းပခဲ့သော ကုန်စည်ပြပွဲ ၌ နိုင်ငံပေါင်း ၉ဝ ကျော်မှ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၄၈ဝဝဝ ပါဝင်ပြသခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ဝ ကျော်မှ လာရောက်ကြည့်ရှုသူဦးရေ ၁၃၄ဝဝဝ ကျော်ရှိခဲ့ကာ အာရှနိုင်ငံ များမှ အများစုပါဝင် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းပြပွဲတွင် ကြိမ်ထည် ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများ၊ လက်မှုပစ္စည်းများ အပြင် စက်မှုထုတ်ကုန် အထည်ချုပ်များ ကိုလည်း လာရောက်ကြည့်ရှု သူများက စိတ်ဝင်စားမှု ရှိကြကြောင်း သိရသည်။
Labels: ပြပွဲများ, လက်မှုပညာ
ရေငန်ထွက်ကုန် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကုန်ချောအဖြစ် ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ပြီးမှသာ ပြည်ပသို့တင်ပို့မည်
ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ရေထွက်ကုန် ပစ္စည်းများတင်ပို့ ရောင်းချသည့် ဈေးကွက်အတွင်း လက်ရှိတင်ပို့ ရောင်း ချလျက် ရှိသည့် ရေငန်ထွက်ကုန် ပစ္စည်းများ၏ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို ကုန်ချောအဖြစ် ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ် ပြီးမှသာ တင်ပို့ရောင်းချ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် အမှုဆောင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဟန်ထွန်း က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ရှိသည့် ရေငန်ထွက်ကုန် ပစ္စည်းများကို အာရှဒေသတွင်း နိုင်ငံများအနက် တရုတ်၊ ထိုင်း၊ တောင်ကိုရီးယားနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ အများဆုံးဝယ်ယူလျက် ရှိပြီး ဥရောပ ဈေးကွက်မှလည်း ဝယ်ယူမှု မြင့်တက် လာကြောင်း သိရသည်။
ရေငန်ထွက်ကုန် များကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချမှု အနေအထားမှာ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်များ ထက် နှစ်ဆခန့်မြင့်တက် လာကြောင်း ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ သိရသည်။
ရေငန်ထွက်ကုန် ပစ္စည်းများကို ပုံမှန် အနေအထားဖြင့် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချ ခြင်းထက် ကုန်ချောအဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး တင်ပို့ခြင်းက နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ ပိုမိုရရှိခြင်းကြောင့် ပြည်ပမှပညာရှင် များကို ခေါ်ယူ၍ ကုန်ချောပြုပြင် ထုတ်လုပ် တင်ပို့ရန် ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
''လက်ရှိတင်ပို့ ရောင်းချနေတဲ့ ရေငန်ထွက်ကုန် တွေရဲ့ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို ကုန်ချောအဖြစ် ထုတ်လုပ်ပြီးမှ ပြည်ပကို တင်ပို့ရောင်းချ တော့မယ်။ အဲဒါကလည်း ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောင်းချတဲ့ ဈေးကွက်နဲ့ ဥရောပကို တင်ပို့ရောင်းချတဲ့ ဈေးကွက်အတွက် ပြင်ဆင်တာပါ။ ထိုင်းနဲ့တရုတ် နိုင်ငံကတော့ ကုန်ကြမ်းတွေကိုပဲ ဝယ် ယူတာ များတယ်''ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ထိုသို့ ရေငန်ထွက်ကုန် များကို ကုန်ချောအဖြစ် ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လေ့လာ သင်ကြားမှုများ ပြုလုပ် သွားမည့်အပြင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ပညာရှင်များ ကိုလည်း ခေါ်ယူသင်ကြား သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၂၉-၁-၂၀၁၆) သောကြာနေ့
ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်) ရှိ အဆင့်မြင့်မြွေဆိပ်ဖြေဆေး စက်ရုံသစ်ကြီး မှဆေးပုလင်း အလုံးပေါင်းတစ်သိန်းကျော် ထုတ်လုပ် နိုင်တေ့ာမည်
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ဆေးဝါး လုပ်ငန်း ဆေးဝါးစက်ရုံ (အင်းစိန်) ဝင်း၌ အသစ်တည်ဆောက် ပြီးစီးတော့မည့် အဆင့်မြင့် မြွေဆိပ်ဖြေဆေး စက်ရုံသစ်ကြီး သည် ယခုအခါတွင် ရာနှုန်းပြည့် ပြီးစီးလာပြီ ဖြစ်ရာ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ မှစတင်၍ တစ်နှစ်လျှင် မြွေဆိပ်ဖြေ ဆေးပုလင်း အလုံးရေ တစ်သိန်းကျော် ထုတ်လုပ်ပေး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း စက်ရုံမှူး/ အထွေထွေ မန်နေဂျာ ဦးကိုကိုအောင် က ပြောသည်။
''၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှာ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး ပုလင်းအလုံး ၁၂ဝဝဝ သာ ထုတ်လုပ် နိုင်ခဲ့တယ်။ အခုဒီစက်ရုံ သစ်ကြီး ပြီးစီးရင်တော့ ဆေးပုလင်း အလုံးရေ တစ်သိန်းကျော် ထုတ်လုပ်ပေး နိုင်တော့မှာပါ။ ဒီဆေးက စက်စွမ်းအားနဲ့ ထုတ်လုပ်လို့ မရပါဘူး။ မြင်းတွေ၊ လားတွေ၊ သိုးတွေ ရဲ့သွေးရည်ကြည် ကနေ BIO နည်းနဲ့ အဆင့်ဆင့် ထုတ်လုပ်ရတာ ဖြစ်လို့ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ တိုးချဲ့မွေးမြူ နေပါတယ်'' ဟုဆက်လက် ပြောသည်။
ယခုအခါတွင် မြွေဆိပ်ဖြေဆေး စက်ရုံအပါအဝင် အခြားဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံများကို ဧက ၈ဝ ကျယ်ဝန်းသော ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန် ဆေးဝါးလုပ်ငန်း စက်ရုံဝင်း အတွင်း၌ တည်ဆောက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီအသီးသီးမှ ကဏ္ဍအလိုက် ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်း စီမံကိန်းစတင် ခဲ့ပြီး ယခုအခါ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး စက်ရုံမှာ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးနေပြီ ဖြစ်၍ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မြွေဆိပ်ဖြေဆေးများ စတင်ထုတ်လုပ် လည်ပတ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ စက်ရုံအတွက် လိုအပ်သော မြင်း၊ လား၊ သိုး တိရစ္ဆာ န် များ၏ သွေးရည်များ ရယူနိုင်ရန် အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ မြင်း၊ သိုး မွေးမြူရေး စခန်းမှ လည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) ဟဲဟိုးရှိ မြင်းနှင့် လား မွေးမြူရေး စခန်းမှ လည်းကောင်း၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး တောင်တွင်းကြီး မြို့နယ် ရန်ပယ်မြင်း၊ သိုး မွေးမြူရေး စခန်းမှ လည်းကောင်း လိုအပ်သော BIO Product သွေးရည်များအား ထုတ်ယူကာ အဆင့်ဆင့် ထုတ်လုပ်ရယူရေး အတွက် မွေးမြူလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် စက်ရုံဝင်း အတွင်း၌ မြွေပွေး၊ မြွေဟောက်နှင့် အခြား မြွေအမျိုးမျိုး တို့အား သဘာဝ အတိုင်း မွေးမြူထားရှိ နိုင်စေရန် မြွေခြံကို တည်ဆောက် နေပြီဖြစ်ရာ မကြာမီ ပြီးစီးတော့မည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ မြွေခြံသို့ ဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ၊ ဆေးဝါးဆိုင်ရာ ပညာသင်ကြား နေသူများ လာရောက်လေ့လာ နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အလားတူ ယခု တည်ဆောက်လျက် ရှိသော ဆေးပြားတောင့် စက်ရုံ အဆောက်အဦနှင့် ပဋိဇီဝဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံတို့ကို မတ်လကုန်တွင် အပြီး တည်ဆောက်ကာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ဆေးများစတင် ထုတ်လုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း စက်ရုံမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းများ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ရေး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ အကူအညီများစွာ လိုအပ်
ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်းများ ရေရှည်ရပ်တည် နိုင်ရေးမှာ ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာန၏ အကူအညီများစွာ လိုအပ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းများ အနေဖြင့် ပညာသင်ကြားရန် အခက်အခဲ ရှိသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို နေ့၊ ည စာသင်ဝိုင်းများ ဖွင့်လှစ်၍ သင်ကြားေ ပးခြင်း၊ ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစား ထားရှိကာ သင်ကြားပေးခြင်း၊ အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများကို လစဉ် ပံ့ပိုးပေးခြင်း စသည့် ကုန်ကျစရိတ်များ အတွက် နိုင်ငံတော်နှင့် အလှူရှင်များ၏ ပံ့ပိုးပေးမှု လိုအပ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
''ဘုန်းကြီးတို့ ကျောင်းမှာ စာသင်ကျောင်းသား ၂၅ဝ ကျော်ရှိတယ်။ ပထမတန်း ကနေ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အထိ နေ့၊ ည သင်ပေးပါတယ်။ သင်ထောက်ကူပြု ပစ္စည်းတွေ လစဉ် လိုအပ်တယ်။ အလှူရှင်တွေက လာလှူပေမယ့် ကျောင်းက ဆရာတွေကို လစာပေးရတာ တွေရှိတော့ အခက်အခဲ ရှိလာတယ်'' ဟု သဲကုန်းကျောင်းတိုက် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် ဦးသုဝေဒ က မိန့်ကြားသည်။
ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်းများကို အစိုးရ ကျောင်းများကဲ့သို့ ကျောင်းစရိတ် ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ လစာ ပံ့ပိုးပေးခြင်းကို လာမည့် ပညာသင် နှစ်တွင် ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ ကျောင်းစရိတ် ပံ့ပိုးပေးရာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း များကိုသာ ပေးအပ်မည့် အပြင် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း များရှိ ဆရာ၊ ဆရာမ များကို အစိုးရဝန်ထမ်း များနည်းတူ လစာပေး သွားမည် ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်းပေါင်း မည်မျှ ရှိသည်ကို သိရှိနိုင်ရန် စာရင်းကောက်ယူ ထားပြီး ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၌ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း ၁၅ဝ ကျော်ရှိကြောင်း ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
မြန်မာ-ဂျပန် ပူးပေါင်းပြီးပြည်ပ သွားရောက်လုပ်ကိုင် လိုသော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်သွားရန်စီစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ အဲဟီမီခရိုင် ရှိ နိုင်ငံခြားနည်း ပညာ အလုပ်သင်များ လက်ခံသင်ကြားမှု ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်ရေး ကောင်စီတို့ ပူးပေါင်း၍ ပြည်ပသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်လိုသည့် ကျွမ်းကျင် လုပ်သားများ မွေးထုတ်သွားရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ပေါများလာ စေရန် ပြည်တွင်းမှ အလုပ်သင်များအား လက်ခံသင်ကြား ပို့ချရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ယင်း အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုအကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီမှု ဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာကို လက်မှတ်ရေးထိုး ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ နားလည်မှု စာချွန်လွှာကို လက်မှတ်ရေးထိုး လိုက်သဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာလုပ်သား များအတွက် လုံခြုံမှု ပိုမိုရှိလာနိုင်ပြီး ထိခိုက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိလာပါကလည်း အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အဖွဲ့ချုပ် အနေဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ Call Center တစ်ခုဖွင့်လှစ် သွားရန် အစီအစဉ် ရှိကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင် ထားသော တရားဝင် အလုပ်သမား ဦးရေ ၃ဝဝဝ ခန့်သာရှိပြီး ယခုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်သူ ပိုမိုများပြား လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၅) အမှတ်(၄)
တရုတ် လာအို မြန်မာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မဲခေါင်မြစ်အတွင်း ပထမဆုံးပူးတွဲကင်းလှည့်ခြင်း ကို ဇန်န၀ါရီ ၂၆ ရက်နံနက်ပိုင်းမှ စတင်
တရုတ်၊ လာအို၊ မြန်မာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့၏ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် မဲခေါင်မြစ် အတွင်း ပထမဆုံး ပူးတွဲ ကင်းလှည့်ခြင်းကို ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက် နံနက်ပိုင်းမှ စတင်ခဲ့ပြီး ပြစ်မှုဆိုင်ရာ မှုခင်း လှုပ်ရှားမှု များအား စောင့်ကြည့်စစ်ဆေး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ လေးရက်ကြာ ကင်းလှည့်ခြင်း အစီအစဉ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ သင်္ဘော ငါးစင်းနှင့် လာအိုနိုင်ငံမှ သင်္ဘောသုံးစင်း စုစုပေါင်း သင်္ဘော ရှစ်စင်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ကင်းလှည့် သင်္ဘောများသည် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက် တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် ရှီရွှမ်းဘန်နာ (Xishuangbanna) ရှိ ကွမ်းလဲ့ ဆိပ်ကမ်းမှ နံနက် ၈ နာရီတွင် ထွက်ခွာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် မဲခေါင်မြစ် အတွင်း ပထမဆုံး ပူးတွဲကင်းလှည့်ခြင်း အစီအစဉ်တွင် ရွှေတြိဂံဒေသ၌ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လက်နက် နှင့် လူမှောင်ခိုကူးခြင်း စသည့်မှုခင်း များအား ကာကွယ်သွားရန် နိုင်ငံ လေးနိုင်ငံမှ ဥပဒေရေးရာ ဝန်ထမ်းများလည်း အဆိုပါ သင်္ဘောများနှင့် အတူ လိုက်ပါမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၅ ရက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ရေပိုင်နက် အတွင်း ကုန်တင်သင်္ဘော နှစ်စင်း ပြန်ပေးဆွဲ ခံရခြင်းနှင့် တရုတ် သင်္ဘောသား ၁၃ ဦး အသတ်ခံရ ပြီးနောက် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ မှစပြီး မဲခေါင်မြစ် အတွင်း ပူးတွဲ ကင်းလှည့်ခြင်း အစီအစဉ်ကို စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (၄၄၇)
လူငယ်များအကြား ဆေးမင်ကြောင်ထိုးမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် ထိုးနှံမှုပိုလာ
လူငယ်များ အကြားတွင် ဆေးမင်ကြောင် ထိုးသည့် လုပ်ဆောင်မှုမှာ ယခု နောက်ပိုင်းတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့် လာပြီး အမျိုးသမီး များမှာ အမျိုးသား များထက် ပိုများနေကြောင်း ပြည်တွင်း ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ သုတေသီများ၏ သုတေသနပြု လေ့လာချက် များအရ သိရသည်။
ဆေးသုတေသန ဦးစီးဌာနနှင့် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး တက္ကသိုလ် တို့ရှိ သုတေသီ များက အမျိုးသမီးများ ဆေးမင်ကြောင် ထိုးခြင်း၏ ၈၄ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဆေးမင်ကြောင် ထိုးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတများ မရှိသည်ကို လည်း သုတေသနပြု လေ့လာမှုများ အရ တွေ့ရသည်။
''ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး တွေကိုမသိဘဲ ထိုးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးမင်ကြောင် ထိုးတဲ့လူငယ် တွေကြားမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာတွေ နည်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်'' ဟု ယင်း သုတေသနပြု လေ့လာရာတွင် ပါဝင်သော ဒေါက်တာ ဝင်းမော်ထွန်း က ပြောသည်။
ထိုသို့ ဆေးမင်ကြောင် ထိုးရာတွင် ၁၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်း ကသာ ကျန်းမာရေးအသိ ရှိကြသော်လည်း ကျန်လူငယ် အများစုမှာ ကျန်းမာရေး အသိမရှိဘဲ ထိုးနှံကြသည့် အတွက် ဆေးမင်ကြောင်နှင့် ပတ်သက်သည့် ပညာပေး လုပ်ဆောင်မှု များကို တိုးချဲ့ လုပ်ဆောင်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ယင်း သုတေသီများက အကြံပြုထား ကြသည်။ ဆေးမင်ကြောင် ထိုးနှံပေးသူမှာ မိမိ ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်ပေါ်တွင် ထိုးထား၍ တခြားသူများ ကိုလည်း ဝန်ဆောင်ခဖြင့် လိုက်လံ ထိုးပေးလေ့ရှိပြီး ထိုးနှံသော ဆေး အရည်အသွေး နှင့် ဒီဇိုင်းပုံတို့ အပေါ် မူတည်၍ ငွေကြေးကုန်ကျမှု ကွာခြားလေ့ ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဆေးမင်ကြောင် ထိုးသော ဒီဇိုင်းရုပ်များကို အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် ရှာဖွေစုဆောင်း ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုးနှံသုံးစွဲသော ဆေးကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းကြောင်း သိရသည်။
ယခင်က ဘုရားပွဲ ဈေးများနှင့် ပွဲလမ်းသဘင် များ၌ ဆေးမင်ကြောင် ထိုးကြလေ့ရှိပြီး ယခုအခါ ဝင်ငွေနည်းသော သူများမှာ ကြုံရာကျပန်း ထိုးနှံကြပြီး ငွေကြေး တတ်နိုင်သူများ မှာ အိမ်တိုင် ရာရောက် ခေါ်ယူ ထိုးနှံခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်များသို့ သွားရောက် ထိုးနှံခြင်းများ ရှိပြီး ဆေးမင်ကြောင် ထိုးနှံရာတွင် ထိုးမည့်ရုပ်ပုံ တစ်ခု၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ ကျပ် သောင်းဂဏန်းမှ သိန်းဂဏန်း အထိရှိကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ကလေးနှင့် ဆယ်ကျော်သက်များ သေဆုံးရသည့် အကြောင်းရင်းများကို ထုတ်ပြန်
နယူးယောက် ၊ ၂၈-၁-၂၀၁၆
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ကလေးငယ် များနှင့် ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်များ သေဆုံးမှုမှာ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် တစ်နှစ်တည်း တွင် ဦးရေ ၇ ဒသမ ၇ သန်းရှိခဲ့ပြီး ၄င်းတို့အနက် ၆ ဒသမ ၃ သန်းမှာ အသက် ငါးနှစ်အောက် အရွယ် ကလေးငယ်များ ဖြစ်ကာ အသက်ငါးနှစ်မှ ကိုးနှစ်အရွယ်ထိ သေဆုံးသူ ဦးရေ ၄၈ဝဝဝဝ နှင့် အသက် ၁ဝ နှစ်မှ ၁၉ နှစ်အရွယ်ထိ သေဆုံးသူ ဦးရေ ၉၇ဝဝဝဝ တို့ဖြစ်ရာ ၄င်းတို့ အများဆုံး သေဆုံးခဲ့ရသော အကြောင်းရင်းမှာ ငါးခုရှိကြောင်း ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ မှ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည်။
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်း၌ ကလေးနှင့် ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် သေဆုံးစေမှု အများဆုံး အကြောင်းရင်း များမှာ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဦးရေ ကိုးသိန်းထက် မနည်း သေဆုံးခဲ့သည်။ ဒုတိယ အကြောင်းရင်းမှာ မွေးကင်းစ ကလေးများ အောက်ဆီဂျင် မဝခြင်း၊ ငှက်ဖျားပိုး ဝင်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှောခြင်း ကြောင့် သေဆုံးခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
မွေးကင်းစ အရွယ်မှ လွန်မြောက် သွားသော ကလေးငယ်များ တွင်လည်း ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှော ခြင်းက အဓိက သေစေနိုင်ပြီး ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်များသည် လမ်းမတော်တဆ ဖြစ်မှု များကြောင့် အများဆုံး သေဆုံးကြ သည်ကို တွေ့ရသည်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် အသက် တစ်နှစ်နှင့် အထက် ကလေးငယ် များသည် မထင်မှတ်သော ဒဏ်ရာများရရှိကာ သေဆုံးသူ များပြားပြီး ယာဉ်တိုက်မှု၊ ရေနစ်မှု၊ သေနတ် မတော်တဆမှု တို့ အဖြစ် များကြောင်း သိရသည်။
''ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ပိုးဝင်တာ ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှော တာတွေကြောင့် လူပေါင်း သိန်းသန်းချီပြီး မသေသင့်ဘဲ သေဆုံးနေ ရပါတယ်။ တကယ်တော့ လေထုနဲ့ ရေထု သန့်စင်မှုကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက် လိုက်ရုံနဲ့ ဒီ ဒေသဆုံးမှုတွေကို အများအပြား လျှော့ချပေး နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်'' ဟု စောင့်ကြည့် လေ့လာသူ တစ်ဦးက ပြောပြ၍ သိရသည်။
အာကာသအမှိုက် များကြောင့် မတော်တဆဖြစ်ပွားရာမှ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်လာနိုင်ဟု သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
မော်စကို ၊ ၂၈-၁-၂၀၁၆
ကမ္ဘာ့ပတ်လမ်း အနိမ့်ပိုင်းတွင် အာကာသ အမှိုက်များ တဖြည်းဖြည်းပိုများ လာနေပြီး နိုင်ငံတကာမှ လွှတ်တင် လိုက်သော အာကာသ ယာဉ်များ၊ ဂြိုဟ်တုများ၊ အခြား စူးစမ်းလေ့လာရေး ယာဉ်များနှင့် မတော်တဆ တိုက်မိနိုင်ကြောင်း နှင့် အမှိုက်နှင့် တိုက်မိ၍ ဖြစ်ပွားသော မတော်တဆမှုကို နားလည်မှု လွဲမှားကာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အချင်းချင်း နိုင်ငံရေး တင်းမာမှုမှ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခထိ ဖြစ်ပွား လာနိုင်သည်ဟု ရုရှားသိပ္ပံ အကယ်ဒမီမှ သုတေသီ များက သတိပေးချက် ထုတ်ပြန် ထားကြောင်း သိရသည်။
ခေတ်အဆက်ဆက် က လွှတ်တင်ခဲ့သော ဒုံးကျည်များ၏ အကြွင်းအကျန် အပိုင်းအစများ သည် ကမ္ဘာ၏ ပတ်ပတ်လည်တွင် စီးမျောနေခြင်း ဖြစ်ပြီး ဒုံးကျည်များ လွှတ်တင်လိုက်သော အကြိမ်ရေ တိုးလာတိုင်း ၄င်း အကြွင်းအကျန် အပိုင်းအစ များလည်း တိုးလာသည်ဖြစ်ရာ ယခုအခါ ကမ္ဘာ့ပတ်လမ်းတွင် ရှိနေသော အာကာသ အမှိုက်များမှာ အလွန် များပြားသည့် အဆင့်သို့ ရောက်နေသဖြင့် လွှတ်တင်လိုက်သည့် အာကာသယာဉ် များနှင့် တိုက်မိ နိုင်ခြေလည်း မြင့်မားလာ နေခြင်းဖြစ်သည်။
''အာကာသထဲက အမှိုက်စတွေဟာ အရွယ်အစား အားဖြင့် အလွန် သေးငယ်သည် ဆိုအုံးတော့ တစ်နာရီကို မိုင်ပေါင်း ၁၇၅ဝဝ အလျင်နဲ့ ရွေ့လျားနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အာကာသယာဉ် တွေနဲ့ တိုက်မိရင် ကြီးမားတဲ့ ပေါက်ကွဲပျက်စီး မှုကြီး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အရင် ဒီအမှိုက်စတွေ နည်းတုန်းက အာကာသယာဉ် တွေနဲ့ တိုက်မိနိုင်ခြေ နည်းပါးပေမယ့် အခု အခြေအနေ အရ အမှိုက်စတွေ အလွန်များ နေပြီမို့ အချိန်မရွေး တိုက်မိနိုင်တယ် လို့ ဆိုရမှာဖြစ် ပါတယ်'' ဟု ၄င်းက ဆက်လက် ပြောပြသည်။
လက်ရှိတွင် နာဆာက ခြေရာခံစောင့်ကြည့် နေသော အာကာသ အမှိုက်စပေါင်း ငါးသိန်းထက် မနည်းရှိပြီး တစ်နာရီလျှင် မိုင်နှုန်း ၁၇၅ဝဝဖြင့် ရွေ့လျားနေကြောင်း၊ အမှိုက်စ အများစုမှာ ဂေါ်လီလုံးခန့်သာ ရှိသော်လည်း အစပေါင်း ၂ဝဝဝဝ ခန့်မှာ ဘောလုံးတစ်လုံး ခန့်အရွယ်ရှိသည်။ လက်ရှိ နာဆာ မှတ်တမ်းတင် ထားသော အမှိုက်စ ငါးသိန်းအပြင် ရုတ်ချည်း မမြင်နိုင်အောင် သေးငယ်လှသည့် အမှိုက်စပေါင်း သန်းပေါင်းများစွာ ရှိနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ဗြိတိသျှကောင်စီမှ ကြီးမှူး၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဗြိတိန်ပညာရေးပြပွဲ ကျင်းပမည်
မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက် ဗြိတိသျှကောင်စီ မှကြီးမှူး၍ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်အတွက် ဗြိတိန် ပညာရေး ပြပွဲကြီးတစ်ခု ကျင်းပသွားရန် စီစဉ် ထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါပြပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေ ဘုရားလမ်းရှိ Sule Shangri-la Hotel Myanmar Ballroom Level-2 ၌ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြပွဲတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ် နှင့်ကောလိပ် များမှ ပါဝင်ပြသမည် ဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်ခန့် ပါဝင်ပြသကြမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များမှ ကိုယ်စားလှယ် များက ပြပွဲသို့ စိတ်ပါဝင်စားစွာ လာရောက်ကြမည့် မိဘများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ၄င်းတို့ ကိုယ်စားပြု ကျောင်းအသီးသီးမှ ပို့ချပေးနေသော ဘာသာရပ်များ၊ ဝင်ရောက်ခွင့် ရမှတ်၊ လိုအပ်သော အရည်အချင်းနှင့် ပညာသင်ဆုများ အကြောင်းကို ရှင်းလင်း ပြောကြားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌ ပညာသင်ကြားလျက် လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံ ရရှိနိုင်သော အခွင့်အရေးများ အကြောင်းကိုလည်း အကျယ်တဝင့် ထည့်သွင်းဆွေးနွေး တိုင်ပင် ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလူငယ်များ ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပညာ သင်ကြားလိုပါက အဆင်ပြေ လွယ်ကူစွာ သွားရောက်သင်ကြား နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဗြိတိသျှကောင်စီ အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ပညာရေး ပြပွဲကြီးကို ပြသနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပညာရေးပြပွဲကို စိတ်ပါဝင်စား၍ တက်ရောက်လို သူများအနေဖြင့် ဗြိတိသျှကောင်စီ https// twitter.com/bmBritish သို့ ကြိုတင်စာရင်း ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဗြိတိသျှကောင်စီမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
Labels: ပညာရေး, ပြပွဲများ
ပြည်ပဈေးကွက်များတွင် မြန်မာ့ကော်ဖီဈေးနှုန်များ ယခင်နှစ်ထက် ပို၍မြင့်တက်
မြန်မာ့ကော်ဖီစေ့ များကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် နည်းစနစ်ပုံစံများ ပြောင်းလဲပြီး အရည်အသွေး၊ အနံ့၊ အရသာ အထူး ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်လာနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်များ၌ ယခင်နှစ်များ ကထက် ဈေးနှုန်းတစ်ဆခန့် မြင့်တက်သွားပြီး ဝယ်ယူမှုပိုမို များပြား လာကြောင်း မြန်မာနို င်ငံ ကော်ဖီအသင်း မှ သိရသည်။
''အရင်က မြန်မာ့ကော်ဖီစေ့ တွေကို ထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ နည်းစနစ်တွေက မမှန်တာတွေ ရှိတယ်။ ပြီးတော့ ထုပ်ပိုးမှုမှာ သေသပ်မှုလည်း နည်းပါးခဲ့တယ်။ အရင် ကတည်းက မြန်မာ့ကော်ဖီရဲ့ အနံ့၊ အရသာ တွေကို နိုင်ငံတကာက လက်ခံကြိုက်နှစ်သက် ကြပေမယ့် အားနည်းချက်တွေ ရှိတာကြောင့် ဈေးကွက်မှာ ဈေးကောင်းမရရှိ ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပြည်ပက ပညာရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကော်ဖီသန့်စင် စနစ်တွေနဲ့ ကော်ဖီအခွံချွတ် စနစ်တွေကို သင်ကြားပို့ချမှု တွေပြု လုပ်ပြီး ဈေးကွက်ကို တင်ပို့တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံတကာ အဆင့် ၈၅ မှတ်အထိ ရရှိပြီး ဈေးနှုန်းတွေ ကလည်း မြင့်တက် သွားတာပါ''ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ကော်ဖီအသင်း မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
လက်ရှိတွင် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) ရွာငံမြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၁ဝဝ ကျော်မှ ကော်စတာရီကာ ကော်ဖီမျိုး များကိုသာ စိုက်ပျိုးပြီး ဈေးကွက်သို့တင်ပို့ ရောင်းချလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။ ၄င်း ကော်စတာရီကာ ကော်ဖီသည် ရွာငံမြို့နယ် အတွင်း၌ တစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန် ၇ဝဝ ကျော် ထွက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခင်နှစ်များက ကော်ဖီအမှည့် တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၅ဝဝ ခန့်သာ ပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၈၅ဝ အထိဈေးရရှိ လာကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် အခွံချွတ်ပြီးသား ကော်ဖီအစေ့ တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၂၅ဝဝ ခန့်သာ ပေါက်ဈေးရှိပြီး လက်ရှိတွင် တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၄၅ဝဝ အထိ ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာကာ နိုင်ငံတကာမှ ဝယ်လိုအားလည်း မြင့်တက် လာကြောင်း သိရသည်။
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၂၈-၁-၂၀၁၆) ကြာသပတေးနေ့
Posted by myawady at 3:59 PM 1 comment:
စက်ရုံများရှိ အစမ်းခန့်ဝန်ထမ်း လုပ်သားများအနေဖြင့် အခကြေးငွေ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကို အလုပ်ရှင်များက ပေးရမည်
စက်ရုံများရှိ အစမ်းခန့် ဝန်ထမ်းလုပ်သားများ အနေဖြင့် အခကြေးငွေ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ကို အလုပ်ရှင် များက ပေးအပ်ရမည်ဟု အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင် နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု မရှိသေးသော လုပ်သားများ အနေဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု ရှိစေရေး လေ့ကျင့်ပေးရန် လိုအပ်ပါက ယင်း လေ့ကျင့်ချိန် ကာလအတွင်း အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ ၏ ထက်ဝက်ခန့်သာ ရရှိပြီး လေ့ကျင့်ကာလ ကျော်လွန်၍ အစမ်းခန့် ကာလအတွင်း သတ်မှတ်ချက် နှုန်းထား၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ ခံစားခွင့် ရရှိမည်ဟု အနည်းဆုံး လုပ်ခလစာ နည်းဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်း ထားရှိသည်။
အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ဝ တွင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန အလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် ကျွမ်းကျင်မှုစံ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှု စံနှုန်း ပြည့်မီအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိသေးသည့် အလုပ်သမား များအား အစမ်းခန့် ကာလ မတိုင်မီ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိစေရေး လေ့ကျင့်ပေးရန် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန များမှာ သုံးလအတွင်း အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ၏ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း ထက်မနည်း လုပ်ခလစာ ပေးရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
ထို့ပြင် အစမ်းခန့်ကာလ သုံးလအတွင်း အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ပေးရပြီး အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း ဖြစ်မှသာ သတ်မှတ်နှုန်းထား လစာ အပြည့်အဝ ခံစားရမည်ဟု ယင်းဥပဒေ၌ ပါရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ အနေဖြင့် အလုပ်သမား တစ်ဦး၏ တစ်နေ့ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား မည်မျှ ရှိရမည်ကို သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပြီး မသမာမှုများ မရှိစေရန် အဆိုပါ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား သတ်မှတ်ချက် ဖော်ပြရမည့် နှစ်ဦး သဘောတူ စာချုပ်များ ပြန်လည် ချုပ်ဆိုရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by myawady at 3:55 PM No comments:
ကျေးလက်ဒေသများရှိ အော်ဂဲနစ်စိုက်ခင်းများ၌ သဘာဝမြေသြဇာ ပြုလုပ်ပုံကို ဂျပန်နိုင်ငံမှပညာရှင်များ လာရောက် သင်ကြားမည်
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပညာရှင်များ ကွင်းဆင်းလေ့လာနေသည်ကို တွေ့ရစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံ ကျေးလက်ဒေသ များရှိ အော်ဂဲနစ်သီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ များအား သဘာဝ မြေသြဇာ ပြုလုပ်ပုံနှင့် အော်ဂဲနစ်သီးနှံ အထွက်တိုးမည့် စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပညာရှင်များ လာရောက်၍ လက်တွေ့သင်ကြား ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း အော်ဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေး ပညာရှင် ဒေါက်တာ နိုင်နိုင်မော် က ပြောသည်။
ထိုသို့ အော်ဂဲနစ်သီးနှံ စိုက်ခင်းများ၌ အသုံးပြုသည့် သဘာဝ မြေသြဇာ ပြုလုပ်ပုံများကို သင်ကြားပေး ရာတွင် ကျေးလက်ဒေသရှိ အော်ဂဲနစ်သီးနှံ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်သူများ သာမက အော်ဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေး ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင် များရှိ သင်ကြား လိုသူများ အားလုံးကို သင်ကြားပို့ချ ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
''အော်ဂဲနစ် စိုက်ခင်းတွေမှာ စိုက်ပျိုးသူတွေ မြေသြဇာ အသုံးပြုတဲ့ နေရာမှာ နွားချေး၊ သစ်ရွက်ခြောက် အဲဒါတွေကို အချိုးညီညီ ရောစပ် အသုံးမပြုဘူး။ တစ်မျိုးဆိုရင် တစ်မျိုးပဲ အသုံးပြု နေကြတယ်။ အဲဒီအတွက် အပင် အာဟာရနဲ့ အသီးအပွင့် အာဟာရ အတွက် ထိရောက် သင့်သလောက် မထိရောက်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ အခု ဂျပန်နိုင်ငံက ပညာရှင်တွေ လာရောက်ပြီး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် သဘာဝ မြေသြဇာ ပြုလုပ်ပုံကို ကုန်ကျစရိတ် မရှိဘဲ သင်ကြားပေး မှာပါ'' ဟု ၄င်းက ဆက်လက် ပြောသည်။
သဘာဝ မြေသြဇာ ပြုလုပ်ရာတွင် သစ်ရွက်ခြောက်များ၊ တိရစ္ဆာ န် များ၏ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများ၊ ရေနှင့် တခြား အသုံးဝင်သည့် မြေဆီလွှာများကို အသုံးပြု၍ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် သဘာဝ မြေသြဇာ ပြုလုပ်ပုံများကို သင်ကြား ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ မှော်ဘီမြို့၌ ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပညာရှင်များ စမ်းသပ် စိုက်ပျိုးသည့် အော်ဂဲနစ် သီးနှံစိုက်ခင်းများ ရာနှုန်းပြည့် အောင်မြင် နေပြီး ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချ နေသည့်အပြင် ထပ်မံတိုးချဲ့ စိုက်ပျိုးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Labels: နည်းပညာ, အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေး
19th Century monastery attracts foreign visitors in Inle
Shwe Yan Pyay Buddhist Monastery.
Nyaung Shwe January 27
Built in the 19th century, Shwe Yan Pyay Buddhist Monastery near Shan State's Inle Lake is drawing large crowd of foreign travellers since the beginning of this year.
The century-old wooden structure in Nyaungshwe Township is famous for its intricate carvings as it boasts Myanmar traditional architecture. The monastery is also well-known as an institution that provides free monastic education and meals for young students.
“The monastery receives foreign travellers every day. It is 100 years old. On full moon days, people from nearby villages come to for fast. The monastery also houses lots of artefacts,” said 78-year-old U Phone Yun fromanearby village.
Most of the foreign visitors to the monastery this year are from Korea while others are from France, Italy and India, according to tour operators in Inle.
“Usually, travellers visit the monastery before takingaboat tour of the lake,” said Ko Aung Soe Oo,atour guide from Asian Tour Co in Inle.
Labels: Heritage, Local News, Religion
Four Mekong countries start river patrols
Yangon January 27
Chinese and Lao ships started guarding Mekong waters on 26 of this month in their first round of joint patrols for the year 2016 in which Myanmar and Thailand are other participants.
Lawmen from four countries – Myanmar, China, Laos and Thailand -- sharing the Mekong basin will do the job of securing Mekong river passage and curbing crimes such as human trafficking, gunrunning and drug smuggling that are frequent in the Golden Triangle region where the remote part of river flows through.
The first round of patrol ships left Guanlei Port in Xishuangbanna autonomous prefecture in the southwest Yunnan Province in China at 8 am. The four-day patrol includes eight river-guard ships -- five Chinese ships and three Lao ships.
Since 2011 joint river guarding force has been launched for 42 rounds. The joint patrol program started in December that year in taking safety measures as fears rose afteragang hijacked two cargo ships in Thai waters two months earlier in which 13 Chinese sailors were killed.
Labels: Mekong, မဟာမဲခေါင်ဒေသ
ရန်ကုန်မြစ်ဝအနီး၌ ဗီယက်နမ်ကုန်တင်သင်္ဘော နစ်မြုပ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်အား စစ်ဆေး အရေးယူသွားမည်
နစ်မြုပ်သွားသည့် ဗီယက်နမ် ကုန်တင်သင်္ဘောမှ သင်္ဘောသားများကို ကယ်တင်လာစဉ်
မြန်မာ့ ပင်လယ်ပြင် ရန်ကုန်မြစ်ဝ ရေကြောင်းပြ စခန်းအနီးတွင် ဗီယက်နမ် ဘိလပ်မြေတင် သင်္ဘောသည် ကျောက်ကြိုးပြတ်ပြီး ဆီတင်သင်္ဘော ကို ၀င်တိုက်ကာ ယင်း ကုန်တင်သင်္ဘော နစ်မြုပ်မှု ယမန်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဒေါပုံမြို့နယ် ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (DMA)မှ ဖြစ်စဉ် အသေးစိတ်အား စစ်ဆေးကာ ဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်ရုံးမှ သိရသည်။
''နစ်မြုပ်သွားတဲ့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံသားပိုင် MV DONG THIEN PHU SILVER ဘိလပ်မြေတင် သင်္ဘောပေါ်မှာ ပါသွားတဲ့ သင်္ဘောသား ၁၄ ဦးမှာ ၁၃ ဦးကတော့ အတိုက်ခံရတဲ့ ဆီတင်သင်္ဘော ပေါ်ကို ရောက်အောင် ဆီတင် သင်္ဘောသား တွေက အမြန်ဆုံး ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ တစ်ဦးကတော့ ပင်လယ်ထဲ မျောပါသွား ပါတယ်။ နစ်မြုပ်တဲ့ သင်္ဘောက ဦးပိုင်းလေးပဲ ပေါ်နေတာကြောင့် တပ်မတော် (ရေ)က ရောက်လာပြီး ရေနစ်မြုပ် သင်္ဘောမှာ ပါတဲ့ နိုင်ငံခြားသား သင်္ဘောသား တွေကို အတိုက်ခံရတဲ့ ဆီတင်သင်္ဘော ကနေ တစ်ဆင့် ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နန်းသီတာ ဆိပ်ကမ်းကို ည ၁၁ နာရီ မိနစ် ၄ဝ မှာ လာပို့တယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်နဲ့ နစ်မြုပ်သွားတဲ့ သင်္ဘော ကိုယ်စားလှယ် တွေနဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက လက်ခံခေါ်ဆောင် သွားပြီး ပြုစု စောင့်ရှောက်လို့ အခုအချိန် မှာတော့ အားလုံးဒဏ်ရာ အနာတရမရှိ ကောင်းသွား ပါပြီ'' ဟု မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်ရုံးမှ ရေကြောင်း ဌာနမှူးချုပ် ဦးအောင်ကျော်ထူး က ပြောသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်သည် ရန်ကုန်မြစ် ရေပိုင်နက် ရေမိုင် ၂၄ မိုင်အကျော် ပင်လယ်ဝမှ ၂ မိုင်ခွဲကျော်အကွာ လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၁၁ ဒသမ ၉၅ မိနစ် (မြောက်) လောင်ဂျီတွဒ် ဝ၉၆ ဒီဂရီ ၁၉ ဒသမ ၄၉ မိနစ် (အရှေ့)တွင် ဗီယက်နမ် ဘိလပ်မြေတင် သင်္ဘောမှ ကျောက်ကြိုး ပြတ်မျောကာ မလှမ်းမကမ်း အကွာတွင် ကျောက်ချ ထားသော ဆီတင်သင်္ဘော ဦးပိုင်းအား ခါးလယ်ပိုင်းဖြင့် အရှိန်ပြင်းစွာ ဝင်ဆောင့် တိုက်မိခဲ့ရာ ခါးလယ်ပိုင်း သင်္ဘော ဝမ်းပေါက်၍ နစ်မြုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သင်္ဘောနစ်မြုပ်မှု ဖြစ်စဉ်အား ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (DMA) ဒေါပုံမှ သင်္ဘော ကျောက်ကြိုးပြတ် မျောပါမှုသည် နေ့လယ်ပိုင်း ဖြစ်ပြီး ယင်း အချိန်တွင် သင်္ဘောသား များ၏ တာဝန် ထမ်းဆောင်မှု၊ အရေးပေါ် ဆောင်ရွက်ချက် များ လိုက်နာမှု ရှိ မရှိတို့အား တာဝန်ရှိ သူတို့က စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ကာ အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မလေးရှားဗီဇာဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားတိုးမြှင့်မှုကြောင့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီများ အခက်အခဲမရှိစေရန် ညှိနှိုင်းပေးမည်
မလေးရှားဗီဇာ ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထား တိုးမြှင့်မှုကြောင့် ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီများ အခက်အခဲ မရှိစေရန် ညှိနှိုင်းပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း Diamond Palace Services ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းသန်း က ပြောသည်။
အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အဖွဲ့နှင့် တစ်ဆင့်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးမည့် Diamond Palace Services ကုမ္ပဏီတို့ သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
''မလေးရှား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဌာနကနေ ဗီဇာတု ပြဿနာတွေ မဖြစ်အောင်ဆိုပြီး ငွေကြေးတိုးမြှင့် ကောက်ခံ လိုက်တယ်။ အခုလို လုပ်လိုက်တာက အရင်က ဗီဇာပေါ်မှာ သံရုံးတံဆိပ် ပါတယ်။ အခု လုပ်ပေးမယ့် ဗီဇာပေါ်မှာ လုံခြုံရေး အပြည့်ရှိ တဲ့ စတေကာနဲ့ ပြောင်းပြီး လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငွေကြေး တိုးမြှင့်သွားတာပါ။ အေဂျင်စီတွေ အဆင်ပြေ အောင်လည်း သီးခြား တွေ့ဆုံမှုတွေ လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်။ အခုလို ကောက်ခံတာ မြန်မာနိုင်ငံ တင် မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားနိုင်ငံတွေ မှာလည်း ဒီတိုင်းပဲ ကောက်ခံတာပါ။ ညှိနှိုင်းတဲ့ နေရာမှာ တိုးမြှင့်ကြေးကို တော့ လျှော့ပေးမှာ မဟုတ်ဘဲ တခြား တစ်နည်းနည်းနဲ့ ပြန်ပြီး ဖြေလျှော့ ပေးတာမျိုးပါ'' ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
Diamond Palace Services ကုမ္ပဏီကို ဗီဇာကိစ္စရပ် များအား မလေးရှားသံရုံး ကိုယ်စား တစ်ဆင့်ခံ ဆောင်ရွက်ရန် မလေးရှား လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဌာနမှ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု ပေးထားပြီး မလေးရှားနိုင်ငံ ဘက်မှ Bukit Megah Sdn. Bhd နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခွင့် လည်း ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မလေးရှား သံရုံးမှ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်တွင် မြန်မာ အလုပ်သမားများ ဗီဇာကြေး သွင်းငွေအဖြစ် ယခင်က အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆ ဒေါ်လာ သတ်မှတ်ထားရာမှ System fee အဖြစ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၆ ဒေါ်လာနှင့် Service fee အဖြစ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၅ ဒေါ်လာ တိုးမြှင့် ကောက်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။
တစ်လလျှင် မြန်မာလုပ်သား ဦးရေ ၃ဝဝဝ ခန့်သည် မလေးရှားနိုင်ငံ သို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိပြီး ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၇၈ ခုမှ ပို့ဆောင်ပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by myawady at 9:50 AM No comments:
ဓာတုကင်းလွတ် သစ်သီးဝလံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဈေးရောင်းပွဲတော် ကျင်းပမည်
မြန်မာနိုင်ငံ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမန် နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချ သူများအသင်းမှ ကြီးမှူး၍ အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း ဓာတုကင်းလွတ် သစ်သီးဝလံ နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် များအား ရောင်းချ ပေးလျက်ရှိရာ လာမည့် မတ်လ ၁၄ ရက်တွင် နှစ်ပတ်လည် ကျရောက်မည် ဖြစ်သဖြင့် နှစ်ပတ်လည် ဈေးရောင်းပွဲ ကျင်းပသွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဈေးရောင်း ပွဲတော်၌ ဓာတုကင်းလွတ် အသီးအနှံများ ရောင်းချခြင်း အပြင် အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲနှင့် စာတမ်းဖတ်ပွဲ များကိုလည်း ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား မှတစ်ဆင့် စားသုံးသူများ နှင့် ရောင်းချသူများ အသိပညာ ပိုမိုရရှိပြီး ဓာတုကင်းလွတ် သီးနှံဈေးကွက် တစ်ခုအဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဓာတုကင်းလွတ် အသီးအနှံများအား တိုးချဲ့ရောင်းချ လာနိုင်ခြင်းဖြင့် စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအစာများကို ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်း ဈေးရောင်းပွဲတော် ၌ ပုံမှန် ရောင်းချနေသူများ အပြင် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ စိတ်ပါဝင်စား သူများလည်း ကြိုတင်စာရင်း ပေးသွင်း၍ ပါဝင် ရောင်းချ နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် ဈေးကွက်အတွင်း ၌ ဓာတုကင်းလွတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက် များအပြင် ငါးပိ၊ ငံပြာရည်နှင့် အဆီအနှစ် ပုံစံဖြင့် ဖျော်ရည် သောက်သုံးနိုင်မှု ပုံစံများကိုလည်း ထုတ်လုပ် လာနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by myawady at 9:48 AM No comments:
မြ၀တီနေ့စဉ်သတင်းစာ (၂၇-၁-၂၀၁၆) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ လူဦးရေသန်း ၆ဝ ကို ထပ်မံခြိ်မ်းခြောက် နေသည့် အယ်လ်နီညို
၂ဝ၁၅ ခုနှစ်သည် ကမ္ဘာမြေ၏ စံချိန်တင် အပူဆုံးနှစ်တစ်နှစ် အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင် သွားခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်ကိုပါ အမွေဆက်ခံသူ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်သည်လည်း အပူဆုံး နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်လာနိုင်ပြီး မပြီးဆုံး သေးသည့် အယ်လ်နီညို ဒဏ်ကို ဆက်ခံရဦးမည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ ရာသီဥတု သိပံ္ပညာရှင် များက ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် ထုတ်ပြန် ထားသည်။
အယ်လ်နီညိုကို အပြင်းထန်ဆုံး ခံစားခဲ့ရသော နိုင်ငံများသည် အာဖရိကနိုင်ငံများ ဖြစ်သည်။ ထိုအထဲမှ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး အရှေ့အာဖရိက နိုင်ငံများသည် အယ်လ်နီညို ကြောင့် အငတ်ဘေးဆိုက် ခဲ့ရသည်။ အာဖရိက၏ အဖွံ့ဖြိုးဆုံး တောင်အာဖရိက ပင် ကုလသမဂ္ဂ၏ အကူအညီ ရယူခဲ့ရသည်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်စု နှစ်စုအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးမှု အလျင်အမြန်ဆုံးနှင့် စီးပွားရေး အင်အား ကောင်းလာခဲ့သော ဖွံ့ဖြိုးဆဲ အီသီယိုးပီးယား သည် အယ်လ်နီညို ကြောင့် စီးပွားရေးများ ပရမ်းပတာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
အီသီယိုးပီးယား ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုသည် စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး ပေါ်တွင် အဓိက အခြေခံထား သောကြောင့် အများဆုံး အထိနာခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ အယ်လ်နီညို ကြောင့် မိုးခေါင် ရေရှားမှုများ၊ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုများ၊ အပူလှိုင်းများ ဖြစ်ပေါ်ကာ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် တွင် အီသီယိုးပီးယား အပါအဝင် အာဖရိကရှိ လူပေါင်းသန်း ၅ဝ လောက် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ ရသည်။ ထိုအထဲမှ ၁ဝ ဒသမ ၂ သန်းသည် အီသီယိုးပီးယား ဒေသခံများ ဖြစ်သည်။
ယခု ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်သည်လည်း မပြီးဆုံးသေးသည့် အယ်လ်နီညို ဖြစ်စဉ်များကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများ အထူးသဖြင့် အာဖရိကနှင့် အာရှ-ပစိဖိတ် ဒေသရှိ နိုင်ငံများမှ စုစုပေါင်း ပြည်သူသန်း ၆ဝ ခန့် အယ်လ်နီညို ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ခံနေရသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂမှ ထုတ်ပြန် ထားသည်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်သည် သမိုင်း တစ်လျှောက်တွင် ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် ပြီးနောက် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် အယ်လ်နီညိုဒ ဏ်ကို အပြင်းထန်ဆုံး ခံစားရသည်။ ပထမအကြိမ် သည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
သမိုင်း အစဉ်အလာအရ နှစ်နှစ်သက်တမ်း အချိန်ယူ တတ်သော အယ်လ်နီညို ကြောင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အရောက်မှ အယ်လ်နီညို လုံးဝ ကင်းစင်သွား နိုင်သည်။ သို့သော် ကမ္ဘာကြီး ပိုမိုပူနွေးလာမှု၊ သစ်တောများ ပြုန်းတီးလာမှု၊ ကာဗွန်ဒိုင် အောက်ဆိုက်များ ပိုမိုထုတ်လွှတ်မှု တို့ကြောင့် သဘာဝ ရာသီဥတု များသည် ပုံမှန်ဖြစ်စဉ် များထက် အဆိုးဆုံး အရာများကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ပိုမို ယူဆောင်လာ တတ်သည်။ အချိန်အခါ မဟုတ် မိုးရွာသည်။ ရေကြီးသည်။ သီးနှံများ ပျက်စီးသည်။ ထိုအချိန်အခါ မဟုတ် ရွာသောမိုးသည် သီးနှံများ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးချိန် ရောက်လျှင် ပေါ်မလာတော့ဘဲ သီးနှံဖြစ်ထွန်းသင့် သလောက် မဖြစ်ထွန်းဘဲ ပျက်စီး ရတော့သည်။
ထို့ကြောင့် စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးကို အခြေခံသော နိုင်ငံမျိုးသည် အယ်လ်နီညို ကြောင့် အငတ်ငတ် အပြတ်ပြတ် ဖြစ်ရသည်။ ထိုမျှနှင့် မပြီးသေး နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများ က ထပ်လာသေး သည်။ ပြင်းထန်သည့် ကာလဝမ်း ရောဂါနှင့် ကူးစက် ရောဂါများ၊ ငှက်ဖျားရောဂါ တို့ကပါ ကပ်ပါလာသည်။ ထိုရောဂါတို့ကို အချိန်မီ မထိန်းချုပ်နိုင် လျှင် လူထောင်သောင်း မက သေဆုံးနိုင်သည်။ အတိတ်ကာလ တုန်းက ကူးစက်ရောဂါများ ကြောင့် မြို့လုံးကျွတ်၊ ရွာလုံးကျွတ် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သေဆုံးမှုများမှာ သမိုင်းတွင်ခဲ့ ဖူးသည်။
အီဘိုလာကဲ့သို့ ကူးစက်ရောဂါ မျိုးသာ အရှေ့အာဖရိက တွင် ထပ်ဖြစ်လျှင် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်လည်း အာဖရိက အတွက် အိပ်မက်ဆိုး ဆက်မက်မည့် နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်သွားဦးမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်သည့် အယ်လ်နီညို စိန်ခေါ်မှုများကို အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း နိုင်ရန် အစိုးရတိုင်းသည် လိုအပ်သည့် ကဏ္ဍများတွင် ကြိုတင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ထား ရမည် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဖြစ်လာလျှင် လတ်တလော ဖြေရှင်းရမည့် ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍတွင် ဖြစ်သည်။
အပူလှိုင်း များကြောင့် ပါကစ္စတန်တွင် လူပေါင်း ၁၂ဝဝ ကျော် သေဆုံးပြီး အိန္ဒိယတွင် လူပေါင်း ၂၅ဝဝ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ရေကြီးမှုကြောင့် လူပေါင်း ၄ဝဝ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရသည်။ နေအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့ရသူ အရေအတွက် ကလည်း သန်းနှင့်ချီ ရှိခဲ့သည်။ ထိုအရာများသည် အယ်လ်နီညို က သယ် ဆောင်လာသော ဆိုးရွားလွန်းသည့် အရာများ ဖြစ်သည်။
ကင်ညာနိုင်ငံ တွင် ကလေး ၂ ဒသမ ၅ သန်းသည် အယ်လ်နီညို ကြောင့် မိုးခေါင်မှုဒဏ်၊ ရေကြီးမှုဒဏ်၊ မြေပြိုမှုဒဏ်၊ အစာရေစာ ပြတ်လပ်မှုနှင့် ဆေးဝါး ပြတ်လပ်မှု ဒဏ်တို့ကို ခံစားခဲ့ရသည်ဟု ယူနီဆက်ဖ် ကဆိုသည်။ ထို့အတူ အီသီယိုးပီးယား တွင် ကလေးငယ်ပေါင်း နှစ်သိန်းကျော် နှင့် ဇင်ဘာဘွေ တွင် လူဦးရေ ၁ ဒသမ ၅ သန်း အယ်လ်နီညို ကြောင့် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ ရသည်။
ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက် တွင် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီး WHO ၏ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်၌ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် အဆိုးရွားဆုံး အယ်လ်နီညို ဒဏ်ကို ခံစားရမည့် နိုင်ငံခုနစ်နိုင်ငံ စာရင်း ပေါ်ထွက် လာခဲ့သည်။ အီသီယိုးပီးယား၊ လစ်ဆိုသို၊ ကင်ညာ၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီ၊ ဆိုမာလီယာ၊ တန်ဇန်းနီးယား နှင့် ယူဂန်ဒါ တို့ဖြစ်သည်။ အီသီယိုးပီးယား ကတော့ ထိပ်ဆုံးစာရင်းမှ ပါဝင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၏ စိန်ခေါ်မှု များသည် နှစ်စမှာပင် ကြိုတင်အဖြေများ ထွက်ပေါ်လာ နေသည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများ၏ ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်ရဦးမည့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ် စိန်ခေါ်ပွဲကြီးလည်း ဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အယ်လ်နီညို သည် အာဖရိကတွင် အသေအပျောက် အနည်းငယ်သာ ရှိခဲ့ပြီး အီသီယိုးပီးယား တွင် လူအသေ အပျောက် မရှိခဲ့ဟု အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အီသီယိုးပီးယား သံအမတ်က ဆိုသည်။ လိုအပ်သည့် အစာရေစာ ပြတ်လပ်မှုနှင့် ဆေးဝါး ပြတ်လပ်မှုကို အသက်ဆက် နိုင်ရုံ အချိန်မီ အရောက်ပို့နိုင် ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၆ ခုနှစ်သည် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်ထက် အခြေအနေ ပိုမဆိုးခဲ့လျှင်တောင် လျော့နည်းသွားမည့် အနေအထား မရှိသောကြောင့် အာဖရိကအတွက် ကံဆိုးမိုးမှောင် ကျသည့် နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်လာဦး မည် ဖြစ်သည်။ တောင်အာဖရိက တွင်တော့ နမီးဘီးယား နိုင်ငံသည် အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်သည်။ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာ န်နှင့် တောရိုင်းသားကောင် များပင် အစာရေစာ ငတ်ပြတ်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ ရသည်။
ယခင် ကတည်းကမှ အပူပိုင်းဇုန် အာဖရိကသည် အယ်လ်နီညို ပြင်းထန်စွာ ဝင်ရောက် လာသောအခါ မည်သည့် နေရာကိုကြည့်ကြည့် ဖုန်တထောင်းထောင်း နှင့် သစ်ပင်များလည်း အရိုးပြိုင်းပြိုင်း ထကာ မြေအောက်ရေ မရှိတော့သော မြေပပ်ကြားအက်များ ကလည်း ယခင် စားကျက်မြေ များကို အစားထိုး နေရာယူထားသည်။ ထို့ကြောင့် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်သစ်သည် အာဖရိကအတွက် အသွင်တူသည့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်ဟောင်း တစ်နှစ်သာလျှင် ဖြစ်နေပါ တော့ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရ ပါသည်။
Labels: El nino, သဘာဝဘေးဆိုင်ရာ
လာမည့်ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းပြင်ပမူလတန်း ပညာရေးကို မြို့နယ်ပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးအထိ တိုးချဲ့သင်ကြားမည်
ရန်ကုန် ၊ ၂၆-၁-၂၀၁၆
လာမည့် ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းပြင်ပ မူလတန်း ပညာရေးကို မြို့နယ်ပေါင်း ၁ဝဝ နီးပါးအထိ တိုးချဲ့သင်ကြား ပေးရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ကျောင်းပြင်ပ မူလတန်း ပညာရေး ဗဟိုကြီးကြပ်မှု ကော်မတီမှ သိရသည်။
''မနှစ်က ကျောင်းသား မရှိတဲ့ တချို့မြို့နယ် တွေကို ဖြုတ်ပြီးတော့ မြို့နယ်အသစ် တွေမှာ သင်ပေးဖို့ စီစဉ်သွားမယ်။ အကျဉ်းထောင်တွေ ထဲအထိသွားပြီး သင်ကြားပေးဖို့ ဆွေးနွေးနေတာ တွေရှိတယ်။ ဒါက ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုလည်း ဖြစ်တယ်။ ကျောင်းပြင်ပ စီမံချက်က စာတတ်မြောက်မှု ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်အထိ တိုးတက် လာတယ်။ နှစ်တိုင်း တက္ကသိုလ်က ကျောင်းသား တွေရော ပညာရေးက တာဝန်ရှိ သူတွေပါ အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်ပါတယ်'' ဟု စီမံချက် မန်နေဂျာ ဦးထွန်းကြည် က ပြောသည်။
ကျောင်းပြင်ပ မူလတန်း ပညာရေး အဖြစ် ကျောင်းမနေရ သူများနှင့် မူလတန်း မပြီးဆုံးမီ ကျောင်းထွက်ခဲ့ ရသည့် အသက် ၁ဝ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အရွယ် ကလေးများအား သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်သည်။
''နှစ်တိုင်း သင်ပေးလေ စာတတ်မြောက်မှု နှုန်းမြင့်လာလေပဲ။ သူတို့ စာသင်ချင် အောင်လည်း ပညာရေး ဌာနက ပံ့ပိုး ပေးသင့်တယ်။ ဥပမာ စာအုပ်၊ ဘောပင် စတာတွေ ပံ့ပိုးပေး တာမျိုးပေါ့'' ဟု ကျောင်းပြင်ပ မူလတန်း ပညာရေး လိုက်လံ သင်ကြားပေး ခဲ့သည့် ဒုတိယနှစ် မြန်မာစာ ကျောင်းသား ကိုကျော်နိုင် က ပြောသည်။
ကျောင်းပြင်ပ မူလတန်း ပညာရေးအဖြစ် ကျောင်းမနေဖူးသည့် ကလေးများအား မူလတန်းအောက် အဆင့်နှင့် မူလတန်းအဆင့် မပြီးမြောက်မီ ကျောင်းထွက်ခဲ့ ရသည့် ကလေးများ အတွက် မူလတန်း အထက် အဆင့်ဖြင့် ဇွန်လမှ စတင်၍ ရက်ပေါင်း ၂ဝ၄ ရက် သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကြောင့် ကျောင်းပြင်ပ မူလတန်း ပညာ သင်ကြားပေး နေသည့် သတ်မှတ်နေရာသို့ မလာရောက် နိုင်သော ကလေးငယ် များအား ၄င်းတို့နေထိုင် သည့်နေရာ အထိ သွားရောက် သင်ကြားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ကျောင်းပြင်ပ မူလတန်း ပညာရေး ဗဟိုကြီးကြပ်မှု ကော်မတီမှ သိရသည်။
အကြွေစေ့ကင်းစင်သော လူ့အသိုက်အ၀န်းဖြစ်ရန် ၂၀၂၀ ပြည့်တွင် စတင်မည်
ဆိုးလ် ၊ ၂၆-၁-၂၀၁၆
ကိုရီးယား ဗဟိုဘဏ်သည် အကြွေစေ့ ကင်းစင်သော လူ့အသိုက်အဝန်း တစ်ခုသို့ အသွင်ပြောင်း နိုင်ရေးအတွက် ယခုနှစ်တွင် အကြွေစေ့များ အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချသွား မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။ ဗဟိုဘဏ်၏ အစီအစဉ်များ အရ ငွေသားဖြင့် ပေးချေ သူများ သည် ပြန်အမ်းငွေ များကို အကြွေစေ့များ အဖြစ် လက်ခံရမည် မဟုတ်ဘဲ ကတ်စနစ်ဖြင့် လက်ခံရရှိမည်ဟု တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဝမ် ၉၅ဝဝ ကျသင့်ငွေ အတွက် ဝမ် ၁ဝဝဝဝ ပေးလိုက်ပါက ဈေးရောင်းသူက ပြန်အမ်းငွေ ဝမ် ၅ဝဝ ကို ဝယ်သူ၏ ကတ်သို့ ချိတ်ဆက်ပေးပို့ ပေးမည် ဖြစ်သည်။
အကြွေစေ့များ ထုတ်လုပ်ရာတွင် တစ်နှစ်လျှင် ဝမ်ဘီလီယံ ၅ဝ ထက်မနည်း အသုံးပြု နေရကြောင်း၊ ပြည်သူများ အနေဖြင့် ၄င်းငွေ အကြွေစေ့များ လည်ပတ်ရေး အတွက် ပေးနေရသည့် ကုန်ကျစရိတ် သည် ပမာဏ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ရှိကြောင်း ဗဟိုဘဏ် က ပြောကြားခဲ့သည်။ အကယ်၍ ယခုကဲ့သို့ ကတ်စနစ်အား ပြောင်းလဲမည် ဆိုပါက ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍ ၌သာမက လူမှုအဖွဲ့ အစည်း တစ်ရပ်လုံး အနေဖြင့် မလိုလား အပ်သော ကုန်ကျစရိတ် များကို လျှော့ချ ချွေတာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဗဟိုဘဏ် အနေဖြင့် နောက်ဆုံး ရည်မှန်းချက် ဖြစ်သည့် အကြွေစေ့ ကင်းစင်သော လူ့အသိုက်အဝန်း အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ရန် ကြိုးစား မှုမှာ အပြောင်းအလဲ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသို့ ပြောင်းလဲနိုင်ရန် အတွက်လည်း ဥပဒေအရ အခက်အခဲ များစွာ ရှိနိုင်သေးကြောင်း တာဝန်ရှိ သူများက ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယား ဗဟိုဘဏ် အနေဖြင့် အကြွေစေ့ ကင်းစင်သော လူ့အသိုက်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်လာရေးကို ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ်တွင် စတင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းကြောင်း လည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Labels: ငွေကြေးဆိုင်ရာ, နိုင်ငံတကာသတင်းမှတ်စု
အယ်လ်နီညိုရာသီဥတုတွင် ရေလိုအပ်ချက်နည်းသည့် သက်တမ်းတိုအထွက်တိုးစပါး ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရန် နှင့် သောက်သုံးရေ စုဆောင်းရန် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
အယ်လ်နီညို ရာသီဥတုတွင် တောင်သူများ အနေဖြင့် ရေလိုအပ်ချက် နည်းသည့် သက်တမ်းတို အထွက်တိုး စပါးကို ရွေးချယ် စိုက်ပျိုးရန်နှင့် သောက်သုံးရေ စုဆောင်းရန် စသည်တို့ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားနိုင်ရန် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာနမှ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန် ထားကြောင်း သိရသည်။
တောင်သူများ အနေဖြင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုများ၊ ပူပြင်း ခြောက်သွေ့မှု များနှင့် ကိုက်ညီသည့် မျိုးစပါးများကို စိုက်ပျိုးနိုင်ရန်နှင့် စိုက်ပျိုးရေ အလေအလွင့် မရှိစေရန် ယခုကဲ့သို့ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ စိုက်ပျိုးရေ ရရှိရန် ခက်ခဲသည့် ဒေသများရှိ တောင်သူများ အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနများ၊ ဆည်မြောင်းဦးစီး ဌာနများသို့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လည်း အသိပေး နှိုးဆော်ထားကြောင်း သိရသည်။
ရေလိုအပ်ချက် နည်းပြီး သက်တမ်းတို အထွက်တိုးစပါး စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ရာသီဥတု ဒဏ်ခံနိုင်၍ ပိုမိုစိတ်ချ ရမည် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ပြောင်းလဲလာသည့် ရာသီဥတုနှင့် အညီ စိုက်ပျိုးမည့် တောင်သူများ အနေဖြင့်လည်း မျိုးစပါးများကို ပြောင်းလဲ စိုက်ပျိုးရန် လိုအပ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့်လည်း ရာသီဥတုနှင့် အညီ ပြောင်းလဲ စိုက်ပျိုးနိုင်ရန် ဟောပြောမှုများ၊ ပညာပေးမှု များလည်း ဆောင်ရွက် ပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အယ်လ်နီညို ရာသီဥတု၏ ပူပြင်းမှုသည် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ မှစ၍ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လပိုင်းအထိ ဖြစ်ပေါ်မည် ဖြစ်ပြီး အယ်လ်နီညို ရာသီဥတု၏ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် ပူပြင်း ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ မိုးရွာသွန်းမှု နည်းပါးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေနှင့် သောက်သုံးရေ ရရှိမှု ခက်ခဲခြင်းများ ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြစ်ဝအနီး ဗီယက်နမ်ကုန်တင်သင်္ဘော နစ်မြုပ် သင်္ဘောအမှုထမ်း ၁၄ ဦးကယ်တင်နိုင်ခဲ့
ရန်ကုန် ၊ ၂၆-၁-၂ဝ၁၆
ရန်ကုန်မြစ်ဝအနီး ပင်လယ်ပြင် လမ်းသာယာမီးပြ အရှေ့တောင်ဘက် ၁ ဒသမ ၅ မိုင်ခန့်အကွာ၌ ကျောက်ချရပ်နား ထားသော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ကုန်တင်သင်္ဘော MV DONG THIEN PHU သည်ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အရှေ့ဘက်မှ လေပြင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် လှိုင်းကြီး၍ ရာသီဥတု ဆိုးဝါးလာပြီး ကျောက်မျောကာ အနီးတွင် ကျောက်ချ ရပ်နားထားသည့် ဆီတင်သင်္ဘော OCEAN OSPREY နှင့်တိုက်မိပြီး နစ်မြုပ်မှုဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါနစ်မြုပ်မှု ဖြစ်စဉ်တွင် ဗီယက်နမ် ကုန်တင်သင်္ဘော MV DONG THIEN PHU ကို ဆီတင် သင်္ဘော၏ ဦးပိုင်းနှင့် ထိခိုက်မိပြီး ရေဝင်နစ်မြုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်၍ မူလကျောက်ချ ထားသည့်နေရာမှ ၂ မိုင်ခန့် အကွာတွင် ဦးပိုင်း အနည်းငယ်ပေါ်သည့် အနေအထား ဖြင့် နစ်မြုပ်သွား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဗီယက်နမ် ကုန်တင်သင်္ဘော MV DONG THIEN PHU ပေါ်ပါ သင်္ဘောအမှုထမ်း ၁၄ ဦးအား ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့မှ ကယ်တင် နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဗီယက်နမ်ကုန်တင် သင်္ဘောသည် အထွေထွေ ကုန်တင်သင်္ဘော ဖြစ်ပြီး ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည့် ဗီယက်နမ် အလံတင်သင်္ဘော ဖြစ်သည်။ ယင်းသင်္ဘော အရှည်မှာ ၈၄ မီတာနှင့် ဗြက် ၁၃ မီတာရှိကာ သင်္ဘော နစ်မြုပ်မှုကြောင့် သင်္ဘောပေါ်တွင် ပါရှိသည့် ဘိလပ်မြေအိတ် တန်ချိန် ၃၅၁၁ တန်ဆုံးရှုံး ခဲ့ကြောင်းနှင့် ဆီတင်သင်္ဘောမှာ ထိခိုက်မှု မရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted by myawady at 2:02 PM No comments: